Get more of Thuan Chye's bullshit, won't you?
နာဇီတွေ နဲ့သူတို့ စင်္ကြာသင်္ကေတ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ က ရလာ
[VIDEO] 31 Ahli Dan Aktivis Umno Besut Sertai Pas
မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ဧည့်သည်တဲ့လား?
နိုင်ငံတော်သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဘုရားထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
AP pictures of Meikhtila Anti-Muslim Riots
[VIDEO] Dr Abu Hassan Hasbullah: UMNO Pengkhianat Melayu & Islam
BBC Interview about Riots in Meikthila
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား မုန်းတီးသူများသို့မေးခွန်း (ပေးစာ ကဏ္ဍ)
Unabashed Devotion to Loving
နိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် မြန်မာအစိုးရအား တူရကီတိုက်တွန်း
မြန်မာပြည်မှ နာဇီပုံစံ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး
ဘာတဲ့လဲ ငြိမ်းချမ်းရေး (ကဗျာ – မောင်ဖုန်းနိုင်)
Pengumuman pengecatan 23 blok Flat Jalan Mayang Pasir di Bayan Baru
ကြီးစွာသော သင်ခန်းစာ ယူကြရမယ်..
မိတ္ထီလာမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ကြေညာချက်
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရန် နှိုးဆော်နေမှု သတိပြုမိစေရန်
Posted: 24 Mar 2013 10:48 AM PDT
Pada 16 mac, Wan Azri a.k.a papagomo mencabar anwar ibrahim supaya menyaman beliau, kemudian sesudah itu anwar menfailkan surat saman berjumlah RM 100 juta, pada 20 Mac, bloger anak anak muda malaysia mendedahkan wajah sebenar Wan Azri ini.
Dan hari ini, setelah pendedahan demi pendedahan di lakukan oleh blog era pasca ini, papagomo telah dengan terpaksa menipu dan membohongi seluruh rakan rakan blogernya, kononnya blog lucahnya itu telah di godam dan bakal di rampas dan ditutup oleh encik lebai google.
Apabila blog sudah di tutup, maka bolehlah Wan Azri ini lari dari masalah ini, psikologi dari bloger Pakatan Rakyat telah menyebabkan beliau tidak boleh melelapkan mata dan tidak mampu berbuat apa apa, serta menerima tekanan yang kuat akibat dari fitnah yang di ciptanya sendiri.
Perkataan kucing yang bernama ''LUCY'' itu membuktikan bahawa papagomo a.k.a wan azri 100% adalah pengendali blog lucah dan fitnah papagomo.com
Salah 1 bukti kukuh ini akan membawa kepada penjara dan RM 200 juta saman fitnah dari2pemimpin Pakatan Rakyat.
Posted: 24 Mar 2013 03:45 AM PDT
I received the invitation quiteawhile ago. Kee Thuan Chye, and old classmate from my secondary school days, had emailed to invite me to the official launch of his latest book, "Ask for no bullshit, get some more." I promised him that I would be there at the refurbished Loke Thye Kee at the corner of Penang Road and Burmah Road.
So when 6.30p.m. (the appointed time) came around yesterday, I duly made my way to the Loke Thye Kee, climbed the flight of stairs and ... squeezed intoahall already filled with people. I wasn't even the first few on the scene. Scores of people had already taken up the best seats in the house and I had to pick my way gingerly to the front where I could spy some still empty seats.
Looked around and noticedafew familiar faces. There, right in front of me were Kah Theang and Andrew, while further away were Teik Wah and his wife, Jo, and Oon Hup. Also mingling in the hall were Philip, Teck Chye and Esther, Swee Heng and his wife, Soo Hay, Ban Seang and Boo Yeang.
Boo Yeang was instrumental in getting the book's official launch going again at the Loke Thye Kee after the embarrassing fiasco at the Penang Club. It helped that Ban Seang was the main man behind Food People and could offer the Loke Thye Kee for the book launch.
But what was this fiasco that I had just mentioned? Well, it was last month that we got to know that the Chief Minister, Lim Guan Eng, had agreed to launch Thuan Chye's book at the Penang Club premises on 28 Feb. The launch would be followed byaforum titled "After GE13, where to, Malaysia?"
All arrangements had been finalised but then, two days before the event, the Club's management developed cold feet and told Thuan Chye that he could no longer use their premises. According to Thuan Chye, the club would no longer allow the Chief Minister to officially launch the book at their premises.
This about-turn has many implications but the most serious among them was the disrespect that the Penang Club had shown to the office of the state's chief executive. Even the Chief Minister himself had said later that this wasaserious error of judgment that can never been forgotten.
Anyway, the Penang Club's loss was now the Loke Thye Kee's gain. The place was quite filled with well-wishers that had come for the launch, as can be seen from the picture below, taken at about 6.45p.m.
Everybody was expecting the Chief Minister to arrive at 7p.m. butacall came to say that his arrival would be delayed by about 15 minutes because his car had broken down. He was somewhere along Perak Road then. Here's me with Thuan Chye soon afterwards.
By then, the crowd was gettingabit impatient and in order to fill in the time before the Chief Minister's arrival, Thuan Chye decided to do some readings from his book. His favourite fall guy was, of course, the former Prime Minister. Everytime he spoke of him, I could feel the sarcasm oozing out from every syllable he uttered. The crowd loved it, by the way, judging from the responses to his readings.
Ah, so finally, at 7.25p.m. the Chief Minister arrived. Strange, no stains on his clothes. No dirt on his fingers. I guess somebody else must have repaired the car for him. Ha ha...
With the CM now present, the programme finally got on its way. I was holding on to my breath when Thuan Chye gave his speech. Would he, or won't he? Those who were there at his last official book launch at Clove Hall in Penang last year would remember that he had let rip with an expletive aimed at Guan Eng's direction. All in good, clean fun, but still he managed to shock everyone, including his guest. But there was no repetition here. Thuan Chye kept his speech very tame, I must say, perhaps leaving it to the CM to provide the fireworks. And at last, Guan Eng spoke. I think he was less prepared to speak at this book launch as compared to last year. But he did speak well off-the-cuff and he made quitealot of mention of the Penang Club fiasco. The crowd hung onto every word he said.
And as can be seen, the crowd had swelled until it was only standing room at the back of the Loke Thye Kee. My estimate: abouta200-strong presence. Oh, by the way, Ban Seang, the air-conditioning was not powerful enough. Maybe you should consider installing more powerful units if you plan to have more functions like this in the future.
And this was the moment of the launch. The unveiling of the red cloth by the book's publisher, and watched by Guan Eng, Thuan Chye's wife and the members of the forum. That's Liew Chin Tong in the picture. He confirmed the already known fact that he would be contesting inaJohor parliamentary seat in the coming General Elections.
Nothing much to say about this last picture, is there?
Do you all forget the Islamic teaching of "al-amr bi 'l-maʿruf wa 'n-nahy ʿan al-munkar" (Amar Makruf Nahi Mungkar in Malay, Brunei and Indonesian languages) or Commanding right and forbidding wrong?
This is the Islamic doctrine mentioned in the Qur'an which is the base of the Islamic institution of hisbah and formsacentral part of the Islamic doctrine for all Muslims.
"Those who follow the apostle, the unlettered Prophet, whom they find mentioned in their own (scriptures), – in the law and the Gospel; – for he commands them what is just and forbids them what is evil; he allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad (and impure); He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honour him, help him, and follow the light which is sent down with him, – it is they who will prosper."
Posted: 24 Mar 2013 03:01 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ လက်တွဲပြီး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုပုံကတော့ တလောကလုံး ဖိန့်ဖိန့်တုန်သွားပြီဟေ့။
နာဇီတွေ သူတို့ စင်္ကြာသင်္ကေတ ဘယ်ကရလာသလဲဆိုတာ လောကတခွင် ပြဲပြဲစင်သွားပြီဟေ့။
Posted: 24 Mar 2013 05:00 AM PDT
Besut - Seramai 31 orang bekas ahli dan aktivis Umno Besut, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Hulu Besut meninggalkan parti tersebut dan menyerahkan borang permohonan menjadi ahli PAS seumur hidup.
Bekas Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK) Ramli bin Bidi (Mat Bidi) 62 tahun mewakili rakan-rakannya menyerahkan borang permohonan tersebut kepada Naib Presiden PAS Datuk Husam Musa dalam satu Majlis Ceramah di Kampung Lubuk Kawah, Hulu Besut, di sini malam ini, Sabtu 23 Mac.
Dari jumlah 31 orang bekas aktivis Umno itu, enam orang yang keluar adalah dari Kampung Lubuk Kawah dan 25 orang dari Kampung Kayu Kelat. -BO
Posted: 24 Mar 2013 02:02 AM PDT
That famous monk looks likeaBengali Kular. Just because he is Buddhist he could disguise as pure Bama and NO ONE dare to even imagine to ask his gene and his ancestors.
မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ဧည့်သည်တဲ့လား? by Zawminn Htwe
လတ်တလော မြင်တွေ့နေရသော အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လူသားအသိပျောက်ရှပြီး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများဖြင့် ပဍိပက္ခ မီးလျှံများအောက် တိုင်းပြည်ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းနေသော မြင်ကွင်းများကို စိတ်နှလုံး တုံလှုပ် ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ မြင်တွေ့နေရသည်။ မီးလောင်ရာလေပင့် ဟူသည့်အတိုင်း ခေါတ်နောက်ပြန်ဆွဲလိုသူများ ဒီမိုကရေစီဟူသော အများသာတူညီမျှခွင့်ကို မရှုစိမ့်သူများနှင့်၊ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမများကို အကယ်စင်စစ် လိုက်နာယုံကြည်မှု မရှိပါဘဲလျက် ဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် လိုသူများ ဟုအမည်ခံထားသည့် အကြမ်းဖက်တို့၏ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်မှုကြောင့် အတွေးအခေါ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား နိမ့်ပါးသူအချို့ တို့က ကြိုးဆွဲရာကပြ အသုံးတော်ခံရင်းဖြင့် လူသတ်ပွဲများကို ပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွဲနေကြသည်မှာ အလွန်တရာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ လှပါသည်ဟု တိုင်းခြားနိုင်ငံများက ချီးကျူးရသော မြန်မာပြည်ကြီးနှင့် မြန်မာလူမျိုးများပင် ဟုတ်ပါလေစ ဟူသော သံသယ၀င်မိသည်။
အပေါစား လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများ ဖြင့် ထိလွယ်ခိုက်လွယ်သော ဘာသာရေးအမုန်းပွါးမှုကို ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဖန်တီးရင်းဖြင့် ရိုးသားသော၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာရေးစံနစ်အလွဲဖြင့်နေထိုင် ခဲ့ရသော၊ အစိုးရ၏ စီမံခံခွဲမှု အလွဲများအောက် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဒဏ်ကို ကျောကော့အောင်ခံစားခဲ့ရသော၊ အခြေခံ လူတန်းစားတို့အား စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းကို တွင်တွင်ကြီးလုပ်ဆောင်နေသော သူများမှာ ကျွန်တော်တို့က ပညာတတ်ပါသည်ဟု လက်ခံထားသော လူတစ်ချို့၊ ဘာသာရေးအရေခြုံထားသော ပုဂိုလ်များ၊ နည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွါ အသုံးချနိုင်သော သူများနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိနေရလေရာ လွန်စွါမှ အော့နှလံးနာဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ထိုသူတို့သည် မွဲပြာပုစိုး၊ ချုပ်ရိုးအထပ်ထပ် ဟူသောစကားအတိုင်း ကိုလိုနီခေါတ်မှအစ၊ လွပ်လပ်ရေးရပြီးစ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု ကာလ ခေါတ်အလယ်နှင့်၊ ပြီးခဲ့သော စစ်အဆိုးရကာလ အုပ်စိုးမှုခေါတ်အဆုံး ထပ်ပြန်တလဲလဲ အသုံးချခဲ့သော ကုလားဗမာ အထိကရုဏ်းကို အဖန်ဖန်အသက်ပြန်လည်သွင်းယူရာတွင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်သော မြန်မာလူမျိုးများ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာအပေါ် ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားမှုအား သဘောပေါက်သိနားလည်သည့် အလျှောက် သံဃာတော်များအား ကုလားများက သတ်ဖြတ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးအား မုဒိန်းကျင့် ဖျက်ဆီးကြောင်း၊ စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်များအား မီးရှို့ဖျက်စီးကြောင်း စသည်အားဖြင့် ရေတွက်လျှင် လက်ငါးချောင်းတစ်ဖက်ပင် မပြည့်တတ်သည့် အပေါစား အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ပြည်သူတို့၏ ဒေါသကို နှိုးဆွကြသည်။
လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ လုယက်မှု အစရှိသည်တို့မှာ မြန်မာအပါအ၀င် လူသားများရှိသော တိုင်းပြည်တိုင်း နေရာတိုင်း၌ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများသာ ဖြစ်သောလဲ မှိုင်းတိုက်တိုင်း ယုံကြည်လွယ်သည့် ပြည်သူအများစုရှိသော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး၌ ကပြအသုံးတော်ခံတိုင်း ၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်လေ့ ရှိရာ ထိုအောက်တန်းကျသော တိုက်ကွက်များကို ထပ်ပြန်တလဲလဲ သုံးစွဲနေသည်မှာ မဆန်းတော့။ နောင်တွင်လဲ ထိုကဲ့သို့ ထူးမခြားနား ဇတ်ထုတ်များအား ဆက်လက်တင်ဆက် နေရင်းဖြင့် ပဍိပက္ခများကို အစဉ်အဆက် ဖန်တီးဦးမည်မှာ မလွဲပေ။ ဘာကြောင့် ၄င်းတို့ ဖန်တီးတိုင်း အောင်မြင်နေရသည်နည်း? အကြောင်းပြချက်များကို ကျွန်တော်ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြည့်ပါမည်။
နှစ်ပေါင်းများစွါ အေးအတူ၊ ပူအမျှဖြင့် ဒီတိုင်းပြည်ကြီးထဲ မှီတင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြသူများမှာ ပဍိပက္ခ ဖြစ်ပွါးလာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ဟူ၍ အလွယ်တကူစည်းတား ခွဲခြားလိုက်ကြသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ငါတို့လူကို သူတို့သတ်နေပြီး၊ သူတို့လူကိုငါတို့ပြန်သတ်ကြစို့ ဟူသော ကြွေးကျော်သံများအောက် မှန်သည်၊မှားသည် ဖြစ်သင့်သည်၊မဖြစ်သင့်သည် ကို မစဉ်းစားတော့ပဲ လက်ဦးမှုရယူ သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အထိကရုဏ်းများ ပိုမိုကြီးထွား ကြယ်ပြန့်လာရသည်။ တစ်ကယ်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘာသာ၊လူမျိုး၊ အသွေးအရောင်၊ အတွေးအခေါ်နှင့်၊ ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြား ခြားနားသော်ငြား တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်ရင်း တစ်နိုင်ငံတည်းတွင် အတူတကွကြီးပြင်း ရှင်သန်လာကြသော တအူတုံဆင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမများပင် ဖြစ်ကြသောကြောင့် သူ့လူ၊ ကိုယ့်လူ၊ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်ခွဲခြားနေခြင်းကို ကျွန်တော်နဲနဲမှ နားမလည်နိုင်ပါ။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်ကို ညီတူညီမျှ ပိုင်ဆိုင်လျှက် နိုင်ငံ၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ အလုံးစုံကို ခံယူကြရမှာဖြစ်ပြီးလျှင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ခိုင်မာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် လူတိုင်းကိုယ်စီ တာဝန်ရှိကြသည်မှာ ဧကန်မုချပင်ဖြစ်သည်။
သို့ပေငြားမြန်မာပြည်သူ တစ်ချို့က မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကသာလျှင်အိမ်ရှင်ဖြစ်သည်၊ အခြားဘာသာ ကိုးကွယ်သူများမှာမူကား ဧည့်သည်များဖြစ်ကြ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကိစ္စများသည် ဧည့်သည်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ အချိန်တန်လျှင် ဘာသာတူသော နိုင်ငံများသို့ ပြန်သွားကြရမည်ဟူသော အတွေးမျိုးရှိကြသည်မှာ လွန်စွါမှပင် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းလှသည်။ အကယ်စင်စစ် ထိုသူများသည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတည်း ဟူသောနိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသည့် ဥပဒေများကို နားမလည်ကြ။ နားလည်ရကောင်းမှန်းလဲ မသိကြပေ။ နားလည်သူတစ်ချို့ကလဲ နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်၍ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ကိုတွင်တွင်ကြီးငြင်းဆိုနေကြသည်။
လတ်တလော မိထ္ထီလာပဍိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်သာမက ကမ္ဘာ၌ပင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သာမက အခြားဘာသာဝင်များကပါ လေးစားထိုက်သည်ဟု ခံယူသော နာမည်ကျော်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက အထက်ပါ အယူအဆကို ခိုင်ခိုင်မာမာကြီး မိန့်ကြားသည်ကို ကြားသိ ဖတ်ရှုရသည့်အခါ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် လွန်စွါ စိတ်ပျက်အံသြမိသည်။ ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒ အများစုကို နှစ်နှစ်သက်သက် လက်ခံပေငြား မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ရောက်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ရှိပြီး၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့က လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ် ခန့်ကသာ ၀င်ရောက်ခဲ့သည် ဖြစ်ရာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက အိမ်ရှင်ဖြစ်၍ ကျန်ဘာသာ တရားများက ဧည့်သည်ဖြစ်သည်တဲ့။ သို့ဖြစ်ရာ ဧည့်သည်များက အိမ်ရှင်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမည် ဟူသတဲ့။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အိမ်ရှင်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများက မြန်မာပြည်တွင် ဧည့်သည်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ မြန်မာပြည်သို့စောစီးစွါ ၀င်ရောက်သည်ကိုမငြင်းပါ။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာထက် စောစီးစွါ ရောက်ရှိနေသော ဟိန္ဒူဝါဒ၊ အရည်းကြီးဝါဒ တို့လဲရှိရာ ထိုအယူအဆတိုင်းဆိုလျှင် ပိုစောတဲ့သူက အိမ်ရှင်ပေါ့။ ဘာသာတရား စောစီးစွါရောက်ရှိသည်နှင့် အထက်ပါ ဘာသာဝင်တို့က အိမ်ရှင်ဖြစ်ရသည်၊ နောက်ကျမှရောက် လာသော ဘာသာတရားကို လက်ခံလိုက်သည်နှင့် အဆိုပါဘာသာဝင်တို့က ဧည့်သည်ဖြစ်ရသည် ဟူသော အယူအဆကို ကျွန်တော့်ဆင်ခြင်တုံတရားက လက်မခံနိုင်ပါ။ သို့ဆိုလျှင် ကချင်ပြည်နယ်တွင် အစဉ်အဆက် နေလာခဲ့သော ကချင်လူမျိုးတို့က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့နှင့်အတူ ရောက်လာသော ခရစ်ယာန်ကို လက်ခံမိသည်နှင့်ဧည့်သည် ဖြစ်သွားရောလား။ မြန်မာဘုရင်များ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာဘုရင် သစ္စာခံတပ်သားများအဖြစ် နေလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာ ၀င်တို့မှတစ်ဆင့် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော မြန်မာလူမျိုးတို့သည်လဲ အလိုလိုနေရင်း ဧည့်သည်ဘ၀ ရောက်သွားရောလား။ သို့ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်းလက်ခံလိုက်ရုံနှင့် အလိုလို အိမ်ရှင်ဖြစ်လာမလား။
ဆရာတော်မိန့်ကြားချက်အတိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော ဘင်္ဂါလီနှင့် အိန္ဒိယ လူမျိုးများသည် ကိုလိုနီ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ခေါ်ဆောင်လာမှုနှင့်အတူ မြန်မာပြည်ကို အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်မငြင်းပါ။ ထိုသူများကိုဧည့်သည်များ ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ယူဆခြင်း ကိုလဲ ကျွန်တော်မငြင်းပါ။ သို့ပေငြား ၄င်းတို့မှ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပေါင်းဖက်၍ ပေါက်ဖွါးလာသော နောင်လာ နောက်သားမျိုးဆက်များအား ဧည့်သည်များ အဖြစ် သတ်မှတ်နေသေးသည်ကို ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်လိုသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေတို့ကို အလုံးစုံသဘောမတူငြား တည်ဆဲဥပဒေအရ (သို့) နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေများ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသော သူများကို ဘာသာမတူသောကြောင့် ဧည့်သည်အဖြစ်နှင့် ဆက်လက်သတ်မှတ် ခြင်းအား လွန်စွါကျိုးကြောင်းစီလျှော်မှုမရှိသော အတွေးအခေါ်အဖြစ် ယူဆသည်။ သို့ရာတွင် ဆရာတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသောစိတ်ဓာတ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လိုသော မူဝါဒတို့ကို လွန်စွါ လေးစားမိပါသည်။
အဆိုပါပညာရှင် များကပါ ယင်းသို့ ယူဆလျှင် သာမာန်ဥာဏ်နဲသော ပုဂိုလ်များအတွက်မူကား ဆိုဖွယ်ရာ မရှိပြီဖြစ်သည်။ ယခုပင် အင်တာနက် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ များ၌ လွန်စွါ အောက်တန်းကျသော အရေးအသားများ အတွေးအခေါ်များဖြင့်၊ မွတ်ဆလင်မ်များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ရေး ကျူးလွန်ရန်၊ နေရပ်ပြန်ပို့ရန်၊ ယင်းတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်များ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းရေး လုပ်ဆောင်ရန် စသည်ဖြင့် တရိစ္ဆာန် ထက်နိမ့်ကျသော စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့် ဆဲဆိုရမ်းကား ရေးသားနေကြသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးစား လိုက်နာသူများဟု ကျွန်တော်လုံးဝ မယုံကြည်။
ကျွန်တော်တို့သည် မွေးရာပါ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ စိတ်ဓာတ်သိမ်ဖျဉ်း ယုတ်ညံစွါဖြင့် တိုင်းပြည်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းလိုသော အဓမ္မ ၀ါဒီများထက် အဆပေါင်းများစွါ မယှဉ်သာလောက်အောင် တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လွဲ၍ မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှ သစ္စာစောင့်သိခြင်းမရှိ။ လိုအပ်ပါက မြန်မာပြည်အတွက် အသက်ပေးရန် အဆင်သင့်ရှိနေသူများဖြစ်ကြပေသည်။ မည်သည့်ဘာသာတွင်မဆို မကောင်းသောသူများ ရှိတတ်သည့်အားလျော်စွါ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများအတွင်းတွင်လည်း၊ ယုတ်ညံသူအချို့၊ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူတစ်ချို့ရှိလင့်ကစား အများစုသော မြန်မာပြည်ရှိ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်များသည် မြန်မာပြည်အပေါ် တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် သစ္စာစောင့်သိ၍ တိုင်းပြည်အပေါ် အသက်ပေးချစ်ခင် မြတ်နိုးသူများ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ဖွင့်ပြောထုတ်ပြဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါးသော်ငြား မြန်မာပြည်သားတိုင်းအား သိစေလိုလှသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အစ္စလာမ် တိုင်းပြည်များနှင့် ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်များ စစ်ပွဲဖြစ်ပွါးနေသည် ကိုတွေ့ရှိပါက လူသားအသိအရ သေကျေပျက်စီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့အတွက် သနားခံခက်ဖြစ်ခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းစေလိုခြင်းမှ အပ အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်၍ ငါတို့ တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့အသက်ပေးကာကွယ်ရမည်ဟူ၍ မည်သူမှသဘောမထားပါ။ သို့ပေငြား မြန်မာပြည်အား အစ္စလာမ် တိုင်းပြည်များအပါအ၀င် မည်သည့်တိုင်းပြည်မဆို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာပါက တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်များကိုစွန့်လှူရန် အသင့်ပြင်ထားသည် ကိုလဲ ယုံကြည်ချက်ထားရှိစေလိုသည်။
ထိုနည်းတူစွါပင်၊ အယူအဆစွဲ ရှိနေသေးသော မြန်မာပြည်သူ အချို့အားလည်း ဘာသာတရား နှင့် လူကို ခွဲခြားရှုမြင် တတ်စေ လိုလှသည်။ မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် အသားအရောင် ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် အဆင့်အတန်းတွင် နေထိုင်ရှင်သန်ရသည် ဖြစ်စေ၊ လူသည် လူပင်ဖြစ်သည်။ လူဖြစ်သည့်အတွင် လူ့တန်ဘိုးရှိသည်။ ခံစားတတ်သည်။ နာကျဉ်တတ်သည်။ ၀မ်းနည်းတတ်သည်။ ၀မ်းသာတတ်သည်။ အခြေခံအချက်များတွင် အားလုံး အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့ပေငြား ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ခေါင်းစဉ်သတ်၍ သတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် သူတို့လဲ ငါတုိ့လို လူပါပဲလား ဟူသော အတွေးအခေါ်သည် လူအချို့ထံတွင် ပျောက်ဆုံးသွားတတ်သည်။ ကျွန်တော် ထပ်ပြောလိုသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် များဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို အခြားကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ မွတ်ဆလင်မ် တို့နှင့် ခွဲခြားရှုမြင်စေလိုသည်။ မွတ်ဆလင်မ် တစ်ယောက်က အကြမ်းဖက်တိုင်း မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် အကုန်လုံးအား အကြမ်းဖက်သူများဟု သိမ်းကြုံး မရှုမြင်စေလို။ ကမ္ဘာ့ အခြားတစ်နေရာရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးလူသတ်သည် ဆိုယုံမျှနှင့် ဆွဲချက်ထဲ ကျွန်တော်တို့ပါ အပါမခံနိုင်ပါ။ အကြမ်းဖက် လူသတ်သော လုပ်ရပ်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာမှ အလျဉ်း လက်ခံခြင်းမရှိကြောင်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှုတို့ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်များကလဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံချကြောင်း သိစေလိုသည်။
ယင်းနည်းတူ ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရှိမှုတို့ကိုလဲ လက်ခံပေးစေလိုသည်။ ၄င်းပြင် လူသားဝါဒနှင့် လူသားအခွင့်အရေး တို့ကို သဘောပေါက်ပြီး သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ခွဲခြားမနေပဲနှင့် တို့အားလုံးအတူတူပဲ ဟူသော အယူအဆတစ်ရပ်အောက် ညီရင်းအစ်ကို စိတ်ဓာတ်ကို လူတိုင်းအား မွေးမြူစေလိုသည်။ ဆိုခဲ့ပါ လူသားဝါဒနှင့် လူသား အခွင့်အရေးကို ငြင်းပယ်ရင်း လူလူချင်းမုန်းတီးမှုကို ဖန်တီးပေးသည့် အရင်းလက်သည် တရားခံမှာ သံသယ ပင်ဖြစ်သည်။ သံသယ သည် လူတိုင်းတွင်ရှိတတ်၍ တစ်ခါတစ်ရံ အကျိုးပေးသော်လဲ ကျွန်တော်တို့သည် သံသယ၀ါဒီများ မဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့မြန်မာပြည်တွင် မွတ်ဆလင်မ်များအား မုန်းတီးနေရခြင်းမှာလဲ ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်မှုအောက် ကြီးထွားလာသော သံသယ များပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သံသယများ သည် ဖြေရှင်းသော စကားများကို ကြားသိခွင့်မရသောအခါ တအုံနွေးနွေး ကြီးထွား လာပြီးလျှင် အသိဥာဏ်ကို အမှောင်ဖုံးစေသည်အထိ ပိတ်ဆို့နှေင့်ယှက်တတ်သည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ ဘာသာအယူဝါဒ မတူသူများတွင် ရှိတတ်သော သံသယတို့ကို အပြန်အလှန်နှီးနှောဖလှယ် ပွဲများ၊ ယှဉ်ကျေးမှု တုံ့လှည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ချင်းဖြင့် ချေဖျက်နိုင်ပြီး ဘာသာပေါင်းစုံ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွါ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့အတွက် ကြီးစွါသော အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည်။
မှန်ပေသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိမွတ်ဆလင်မ် အချို့တွင်လဲ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှု ဘာသာရေး သည်းခံစိတ် နည်းပါးမှု စသည်တို့ အမြစ်တွယ်ရှင်သန်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသူတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အသုံးမကျတော့သော အတွေးအခေါ် များကို စွန့်ပယ်ရန်လိုပြည်လျှင် တက်ကြွသော မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် မြန်မာ့တန်ဖိုးများကို လေးစားလိုက်နာလျက် ဘာသာပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲချစ်ကြည် နေထိုင်ရေးကို ရှေးရှုလျက်၊ မိမိတို့၏ အပြုအမှု၊ အပြောအဆိုနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံတို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွက် လွန်စွါမှပင် အရေးကြီးလိုအပ်လှသည်။ မြန်မာပြည်သားဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိခံယူပါလျှင် နိုင်ငံသားအဖြစ် နောက်ဆက်တွဲပါလာသော တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာခံမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့ကိုပါ မမှိတ်မသုံ လက်ခံကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ အစ္စလာမ် ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်လဲ ခေါတ်နှင့်လျော်ညီသော၊ မြန်မာ့မူ မြန်မာ့ဟန်နှင့် ကိုက်ညီသော၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ရေရှည်စီမံကိန်းများချမှတ် အကောင်အထည် ဖေါ်သွားရန် လွန်စွါ အရေးကြီးလှသည်။ ထိုနည်းတူ အခြားဘာသာဝင်များနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရေး ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်များကိုလဲ တိုင်းပြည်အား အကျိုးပြုသောနိုင်ငံသားကောင်း များ ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ထိရောက်သော စီမံကိန်းများအား ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ယခုဖြစ်ပွါးနေသော ပဍိပက္ခများအား အစ္စလာမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကြား ဖြစ်ပွါးသော ပဍိပက္ခများဟု မယူဆပဲ အကြမ်းဖက်များနှင့် ယဉ်ကျေးသော လူ့အသိုင်းကြား ဖြစ်ပွါးနေသော ပဍိပက္ခများ ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြပြီးလျှင်၊ ဘာသာတရားတို့ကို လေးစားလိုက်နာသော ယဉ်ကျေးသည့် ဘာသာဝင်တို့ အနေဖြင့် အထိကရုဏ်းအသွင် ပိုမိုကြီးထွားမလာအောင် တားဆီး ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုသည်။ ဤနည်းနှင်နှင် ပင် ကျွန်တော်တို့သည် သူ့လူ ကိုယ့်လူ ဟူ၍ ခွဲခြားရှုမြင်သော၊ အိမ်ရှင် ဧည့်သည်ဟူသော ပိုင်းခြားဆက်ဆံသော အတွေးအခေါ်တို့ကို စွန့်လွှတ်၍ တို့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သည်၊ တစ်အိမ်တည်းသား ဖြစ်သည်ဟူသည့် အယူအဆကို မြဲမြံစွါ ကိုင်စွဲလျက် အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျနေသော မြန်မာပြည်ကြီးကို စုစုစည်းစည်းနှင့် စွမ်းစွမ်းတမံ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ထောင်ကြဖို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါသည်။
Posted: 24 Mar 2013 01:15 AM PDT
မတ်လ ၂၄ ၊ ၂၀၁၃
ဂုဏ်လင်း ပေးပို့သော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
အကြောင်းအရာ။ ။ အခြားဘာသာဝင်များ အပေါ် ယုတ်ညံ့စွာစော်ကား အနိုင်ကျင့်ပြီး မိမိ၏ ဘာသာသာသနာကို ပြန်၍ သိက္ခာကျအောင် ပြုလုပ်နေသူ အလဇ္ဇီ ရဟန်းတုများ နှင့် နောက်လိုက် တောကြောင်တို့အား မသိကျိုးကျွံ ပြုနေခြင်းသည် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာနှင့်ချီ၍ အရှက်ရဖွယ် ဖြစ်နေပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံလျှောက်ထားခြင်း။" ရှက်ခြင်းရှိသောသူကို မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သောသူဟူ၍ သိအပ်၏။" (အတ္တရ ရက္ခိတ သုတ်၊ သံယုတ်) "
၃၈ဖြာ မင်္ဂလာတွင် "ဂါရဝေါစ" ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးတွင် ပါဝင်သည့်အတွက်၊ တပည့်တော်၏စာ၌ အချို့သူများအား နာမည်သာရေးကာ၊ ဂါရ၀ပြု စကားလုံးများ ထည့်မရေးထားသည်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရား" ။
မရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေ ဂါရ၀ ထားမိပါက "အမင်္ဂလာ" ဖြစ်ရာ ၊ တပည့်တော်၏ စာ မင်္ဂလာရှိစေချင်၍ ဖြစ်ပါသည်။
ရတနာသုံးပါးတွင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဟူ၍ အစဉ်လိ်ုက်ရှိရာ၊ သံဃာသည် သုံးပါးမြောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရှေ့တွင် ဘုရား နှင့် တရားက လက်ဦးမှု ရယူထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယင်းသံဃာကိုယ်၌က ဘုရားရှင်ကို လက်ခံယုံကြည်ပြီး၊ တရားစောင့်ထိန်းမှု ရှိရပါသည်။ သို့မှသာ သံဃာစစ်စစ် ဗုဒ္ဓသားတော်မည်ပါသည်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဘုရားမေ့၊ တရားမဲ့ သံဃာတော်များပင် ဖြစ်နေလင့်ကစား၊ " ခန္ဓာကိုယ်ကို သက်န်းစည်းထားလို့ " ရိုသေရမည်ဟု ခံယူထားကြပါသည်။ " သံဃာအား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း " ကို " သင်္ကန်းအား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း " အဖြစ် အယူမှားသော မိစ္စာဒိဌိ ဖြစ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာ့ဂုဏ်ရည် ဟူသည် ပုဂ္ဂိုလ်၌သာ တည်ကာ၊ အ၀တ်သင်္ကန်း၌ မတည်ကြောင်းကို နားလည်ဟန် မရှိကြပါ။
" ရဟန်းတို့၊ မှားယွင်းသော အမြင်သည် တရားမဟုတ်၊ မှန်ကန်သော အမြင်သည် တရားမည်၏။ မှားသော အမြင်ကြောင့် များစွာသော ယုတ်ညံ့အကုသိုလ်တရားတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ဤသည်ကား အကျိုးမဲ့ရာတည်း။ မှန်သော အမြင်အကြောင်းကြောင့် များစွာသော ကုသိုလ်တရားတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ ဤသည်ကား အကျိုးတည်း။ " (အဇိတ သုတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်)
ယခုအခါတွင် အပုပ်ကောင် ရုပ်ဆောင်ထားသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ သင်္ကန်းစည်းကာ၊ နှလုံးသားကို သင်္ကန်းစည်းမထားသော ရဟန်းတု၊ သံဃာယောင်များသည် ဆူပူအုံကြွမှု နှင့် အဓိကရုဏ်းများ ပေါ်ပေါက်အောင် စင်မြင့်ပေါ်တွင်ဟောပြော၍ တစ်နည်း၊ စာတိုစာရှည်ဖြင့် လုပ်ကြံရေးသားခြင်းက တစ်ဖုံ၊ မုသားစွပ်စွဲပြောဆို ၀ါဒဖြန့်ဝေမှုကလည်း တစ်မျိုးအားဖြင့် အရှက်နည်း အတင့်ရဲကာ ယုတ်ညံ့စုတ်ချာသော အလုပ်ကိုပြုလုပ်နေကြပါသည် ဆရာတော်ဘုရား ။
ထိုသင်္ကန်းရုံ အလဇ္ဇီရဟန်းများ တစ်စထက်တစ်စ များပြားလာလျှင် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်း ထိုသံဃာယုတ်များကို မှီ၍ ဗိုလ်ချုပ် သတိပေးဖူးသည့် နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက် မသူတော်တို့၏ သာသနာသာ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သံဃာတော်တို့၏အပိုင်းသည် အပြန်အလှန် တည်မှီနေ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကြောက်စရာကောင်းလှသော အလဇ္ဇီရဟန်းတို့အကြောင်းကို တပည့်တော်မှ အနည်းငယ်တင်ပြပါရစေ ဆရာတော်ဘုရား။
၁။ ပညာဝရ (ဓမ္မဒူတ – သိမ်ဇရပ်) အလဇ္ဇီရဟန်းက ၁၆-၁-၂၀၁၃ နေ့၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းတရားပွဲတွင် " ဘ၀လမ်းခွဲ တရားတော် " ဟု အမည်တပ်ကာ ဟောကြားရာ၌ -
ကျောင်းဆောက်ဖို့ ကားပေါ်မှ ပစ္စည်းများလာချသောအခါ၊ တိပိဋကကိုယ်တော် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးက " ဘယ်ဆိုင်က ၀ယ်လာတာလဲ " ဟု မေးရာ ၊ ဆိုင်နာမည်ပြောတော့ ၊ " ဒါမွတ်စလင်ဆိုင်ဘဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ မွတ်စလင်ဆိုင်က ၀ယ်လာရတာလဲ" ထပ်မေးရာ၊ " ဗမာဆိုင်က ဈေးကြီးလို့ပါ ဘုရား " ဟု လျှောက်တင်ရာ၊ ဆရာတော်ဘုရားက " ဈေးကြီးရင် ကြီးပါစေ ၊ ဗမာဆိုင်ကပဲ ၀ယ် " ဟု ပြောဆိုကြောင်း၊ ပညာဝရက ပညာမရသော စကားများထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါသည်။ အလဇ္ဇီပညာဝရ၏စကားများကို ခွဲခြမ်းစိစစ်ရပါသော် -
(က) တိပိဋက မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက မန္တလေးရှိ ဘယ်ဆိုင်က ဗမာဆိုင်၊ ဘယ်ဆိုင်က မွတ်စလင်ဆိုင်၊ ဘယ်ဆိုင်က တရုတ်ဆိုင် စသည်ဖြင့် အတိအကျ သိနေပုံထောက်လျှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပိဋကတ်တော် အာဂုံဆောင်နိုင်မှုကိုပင် သံသယ၀င်စရာ ရှိလာပါတော့သည်။ " မန္တလေးမြို့ပေါ်က ဆိုင်တွေအကြောင်း သုတေသနပြုနေရလို့ ဆရာတော်ခမျာ စာကျက်ချိန်၊ စာချချိန် ၊ တရားမှတ်ချိန်၊ မေတ္တာပို့ချိန်ကော ရှိသေးရဲ့လား " အတွေးဝင်မိပါသည်။
(ခ) မင်းကွန်းဆရာတော်၏ " မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း " မှာ အလွန်ပြောင်မြောက်သည့်အတွက် သီချင်းအသွင်အဖြစ်ပင် သီဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာတော့်မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းသည် မြန်မာပြည်မှာ သာမက ကမ္ဘာကျော်ဆုတောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုတော့ – "……..အနန္တစကြ၀ဠာ၊ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ " ဟုအစချီလျက် အနန္တနှင့်ချီသော ဆုတောင်းပိုင်ရှင်က မန္တလေးက မွတ်စလင်များအပေါ်ကျတော့ မေတ္တာ မထားနိုင်သည်မှာ ရယ်စရာကောင်းသည့်အပြင်၊ တရားနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သူ့ဆုတောင်း သတ်သတ်စီဖြစ်လျက် ဆန့်ကျင်ဘက် အသွင်ဆောင်သွားသောကြောင့် အလဇ္ဇီရဟန်း ပညာဝရ ပြောချလိုက်ပုံမှာကား ရွံ့မုန်းစရာပင် ကောင်းနေပါတော့သည်။
(ယင်းသို့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နာမည်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပေါကြောင်ကြောင် မုသားစကားများဖြင့် အရောင်တင်သွတ်သွင်းလျက် ရိုးသားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ အသိဥာဏ်ဆင်းရဲသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွင်း အလဇ္ဇီရဟန်း ပညာဝရ၏ လှုံဆော်သွေးထိုးမှုသည် သံဃာအယောင်ဆောင်ခြင်းက တစ်ပြစ်၊ မုသားစကား ကလိန်ကကျစ်တရားများဟောခြင်းက တစ်ပြစ် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဘာသာတရားအရရော ဥပဒေကြောင်းအရပါ ပြစ်မှုမြောက်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) " ဗမာဆိုင်တွေက ဈေးကြီးတယ်" ဟု ဆိုရာ သူ့စကားအရ ဗမာများကို " အမြတ်ကြီးစား ၀ိသမလောဘသားများ " ဟု တိုက်ရိုက် စော်ကားလိုက်ရာ ရောက်သွားပါသည်။
(ဃ) မွတ်စလင်တို့၏ ယုတ်မာပုံများ ဟုဆိုကာ ဇာတ်နာအောင် လုပ်ကြံပြောကြားနေသော်လည်း၊ ပညာဝရ အနေနှင့် ရယ်ကာမောကာ ပြောဆိုပြနေပုံကို ကြည့်လျှင်ပင် အဖြစ်မှန်အကြောင်းမဟုတ်သည်ဖြစ်သဖြင့် သူတကယ်စိတ်မနာကြောင်း ဖော်ပြနေပါသည်။
(င) မွတ်စလင်တို့၏စီးပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်အောင်လှုံဆော်ကာ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏အကျိုးကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ မွတ်စလင်တို့၏ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများနှင့် စာသင်ကျောင်းများကို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မွတ်စလင်များအပေါ် ရွံ့ရှာ မုန်းတီးလာအောင် လုပ်ကြံ ဇာတ်ဆင်ဝါဒဖြန့်ခြင်းများကို ဖန်တီးလျက် – အများသူငါတို့ မွတ်စလင်များနှင့် မပတ်သက်ရဲ၊ မဆက်ဆံရဲတော့ဘဲ မွတ်စလင်များအပေါ်အထင်သေးလာစေရန် စီမံကိန်းများချကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေများပြားလာဖို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်းက " ဗုဒ္ဓ၀ါဒီအမည်ခံ အကြမ်းဖက်အရေးတော်ပုံကြီး " ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် တာဆူနေကြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။
၂။ ထိုအလဇ္ဇီရဟန်းတို့၏ လုပ်ကြံဟောကြားချက်များကို တပည့်တော်အနေဖြင့် တစ်ခုချင်း တင်ပြချေဖျက် သုတ်သင်ပါက စာမှာ ရှည်လျားသွားပါမည်။
ဆရာတော်ကြီးများအား အားနာလှပါသဖြင့် တပည့်တော်မှ ခြုံငုံတင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
* ဗလီတွေမှာ လက်နက်တိုက်တွေ ရှိတယ်။
* ၇၈၆ ဆိုတာ ၂၁ ဖြစ်လို့ ၂၁ ရာစုမှာ ဗမာပြည်ကို အစ္စလာမ်က လွှမ်းမိုးရမယ်။
* ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းကလေးတွေကို ယူနိုင်သူဖြစ်ယင် ဗလီတွေက ဆုငွေချီးမြှင့်တယ်။
* အစ္စလာမ်ထဲဝင်တဲ့သူတွေဟာ ရွှေတိဂုံစေတီနဲ့ မဟာမြတ်မုနိစေတီတော်ပုံတွေကို ခြေနဲ့ အရင် နင်းပြပြီးမှ ၀င်ရတယ်။
* ဂျိဟာဒ် ဆိုတာ ဘာသာမတူတွေကို သတ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
* မွတ်စလင်ကန်ထရိုက်တွေ တိုက်ဆောက်ရင် ဗလီအတွက် တစ်ခန်းချန်ထားတယ်
စသည်တို့အပါအ၀င် အခြားသော စကားများစွာတို့မှာ ခိုင်မာခြေမြစ်မှုမရှိသော ယုတ္ထိယုတ္တာကင်းမဲ့သော အသိမ်အဖျင်း မုသားစွပ်စွဲချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
" ရွှေတိဂုံ နဲ့ မဟာမြတ်မုနိပုံတွေကို ခြေနဲ့နင်းပြီးမှ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ ၀င်ရတယ် " ဟူသည် ပညာမပြည့်ဝသော ပညာဝရ ၏ သိမ်ဖျင်းနိမ့်ကျသည့် ပုတ်ခတ်စွပ်စွဲချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
" အမိယုတ် နှုတ်ကြမ်း " ဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ မွတ်စလင်တွေကို ၄င်းတို့လေးစားလိုက်နာရသော ကုရ်အာန်ကျမ်းထဲ၌ အတိအလင်း လမ်းညွှန်ဆုံးမထားပါသည်။
" အသင်တို့သည် အခြားကိုးကွယ်ရာများကို ကဲ့ရဲ့ခြင်း မပြုကြလေနှင့်။ " (ကုရ်အာန် ၆း၁၀၈)
ထို့ကြောင့် အခြားကိုးကွယ်ရာများအား ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားရန် ဝေးစွ၊ နှုတ်ဖြင့်ပင် ပြစ်မှားခွင့် မရှိပါ။
" ကောင်းသောအလုပ်ကိုသာ ပြုလုပ်ကြကုန်လော့ "။ (ကုရ်အာန် ၂၂း၇၇) ဟု ညွှန်ကြားထားသဖြင့် အောက်တန်းကျသည့်အလုပ်ကို အသာထားဦး၊ သာမန် မကောင်းမှု တစ်ခုတလေကိုပင်လျှင် အစ္စလာမ်က ပြုလုပ်ခွင့် ပေးမထားပါ။
စင်စစ်သော် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ညွှန်ပြခဲ့သော - တမန်တော်အိဗ်ရာဟင်မ်၏ " မိလ်သလ် " လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာသူအား မွတ်စလင်ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
" အသင်တို့၏ သာသနာကို ငါအရှင်မြတ်က ကြပ်တည်းခက်ခဲမှု လုပ်ထားတော် မမူ။ အသင်တို့ ဖခမည်းတော်ကြီး အိဗ်ရာဟင်မ်လမ်းစဉ်ဖြစ်ကာ၊ အသင်တို့ကို မွတ်စလင်များဟု ကင်ပွန်းတပ်လေပြီ။" (ကုရ်အာန် ၂၂း၇၈) ဟူ၍လည်းကောင်း၊ " အလ္လာဟ်အရှင်၏ အမိန့်တော်များကို နာခံလျက်၊ ကောင်းသောအမှုကို ပြုကျင့်ကာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော အိဗ်ရာဟင်မ် ၏ လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာသူ အကြင်သူထက် မည်သူ၏ဘ၀တည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်က ပိုကောင်းပါ့မည်နည်း" ( ကုရ်အာန် ၄း၁၂၅) ဟူ၍လည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
တမန်တော်အိဗ်ရာဟင်မ်၏လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာသူ မွတ်စလင်တ်ိုင်းသည် အစ္စလာမ်ကို မယုံကြည်သူများအား ရိုက်နှက်ဖို့ ဆဲဆိုဖို့ဝေးစွ၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားကို မဆိုထားဘိ၊ ထိုသူများအတွက် အလ္လာဟ့်ထံ၌ ဆုမွန်ကောင်းပင် တောင်းပေးရပါသေးသည်။ ၄င်းသဘောထားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကျမ်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
" အိဗ်ရာဟင်မ်က " အို- ကျွန်တော်မျိုးတို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်၊ မည်သူမဆို ကျွန်တော်မျိုးအား နာခံခဲ့ပါသော် ထိုသူသည် ကျွန်တော်မျိုး၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကာ၊ ကျွန်တော်မျိုးအား မနာခံဖီဆန်ပါသော် ဧကန်အမှန် အရှင်မြတ်သည် ခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင်၊ သနားကြင်နာတော်မူသောအရှင်သာ ဖြစ်တော်မူပါသည်။ " (ကုရ်အာန် ၁၄း၃၆)
" ၂၁ရာစုမှာ အစ္စလာမ်လွှမ်းမိုးရေးစီမံကိန်း – ၇၈၆ " ဟူသည့် ရမ်းတုပ်စွဲချက်အား မွတ်စလင်တို့မှ တအံ့တသြ ဖြစ်ကြရပါသည်။ အကြောင်းမှာ – "၇၈၆" ဟူသည် ကုရ်အာန် (၁း၁)ကို အက္ခရာသင်္ချာကိန်းဂဏန်းအရ တွက်ချက်ထားမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစာကြောင်းမှာ " ကရုဏာပေါ် ကရုဏာဆင့်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် " ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ မွတ်စလင်မ်များသည် မည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ဤဒီဓမ္မလမ်းညွှန်အား ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရပါသည်။ ( ကြည့်ရှုလေ့လာရန် – ကုရ်အာန် ၁၁း၄၁၊၂၇း၃၀၊ ၉၆း၁)
ကရုဏာကင်းမဲ့သောအလုပ် မလုပ်မိစေရန် သစ္စာမာန်တင်း၊ နှလုံးသွင်းရေး ဓမ္မသတိလေ့ကျင့်ခန်း ဟုဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာ၌ ယင်းသို့ ကုရ်အာန် (၁း၁)ကို အက္ခရာသင်္ချာကိန်းဂဏန်းအရ "၇၈၆" အက္ခရာတန်ဖိုးအဖြစ် တွက်ချက်ခြင်းကို အာရဗ်တွေက အသိအမှတ်မပြုသည်ကို သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၄င်းနည်းစံနစ်မှာ အိန္ဒိယတိုက်နယ်မှ မွတ်စလင်များသာ အသုံးပြုကြလင့်ကစား လက်မခံသူများလည်း ရှိပါသေးသည်။ " ၇၈၆ မှာပါတဲ့ ဂဏန်းသုံးလုံးပေါင်းရင် ၇+၈+၆ =၂၁ ရလို့ ၂၁ရာစုကို ရည်ရွယ်တာ " ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ကြောင့် မွတ်စလင်များ ထပ်ဆင့်အံ့သြနေရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရဗီအက္ခရာ၏စုပေါင်းကိန်းအား ထိုကဲ့သို့ ထပ်ဆင့်ပြန်ပေါင်း၍ မရပါ။ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သွား၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါအယူအဆကို တင်ပြနေခြင်းမှာ အစ္စလာမ်ကိုမသိ၊ ကုရ်အာန်ကို မလေ့လာသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါမည်။
" ယှဉ်တွဲကိုးကိုယ်သူများ မနှစ်မြို့သော်ငြားလည်း ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိ၏စေတမန်အား အလုံးစုံသော ၀ါဒလမ်းစဉ်များထက်ဝယ် ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် တရားလမ်းညွှန်၊ လမ်းစဉ်မှန်တို့ဖြင့် စေလွှတ်ခဲ့လေပြီ "။ (ကုရ်အာန် – ၆၁း၉)
တရားလမ်းစဉ်တစ်ရပ်သည် အရာခပ်သိမ်းတို့အပေါ်ဝယ် ထင်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်ဖို့ရာ -
(က) ထောင့်စုံ၊ ဘက်စုံမှ ညွှန်ကြားပေးနိုင်သော ဓမ္မလမ်းညွှန်ဖြစ်ရမည်။
(ခ) ၀ါဒလမ်းစဉ်ကိုယ်၌ကလည်း မှန်ကန်သော လမ်းစဉ်၊ "သစ္စာမဂ္ဂင်" ဖြစ်ရမည်။ ရနံ့သင်းမှုကို သေးသိမ်ညံ့ဖျင်းမှုဖြင့် မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ဖြစ်လာသမျှအတွက် သစ္စာအလှနှင့်သာ အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါမည်။
မွတ်စလင်ဗလီများကို ချောင်ကြိုချောင်ကြား၌ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး မတည်ဆောက်ထားကြပါ။ မြို့လယ်ကောင်တွေမှာ ရှိတာများပါသည်။ မွတ်စလင်တို့သည် တစ်နေ့ (၅)ကြိမ် ၀တ်ပြုကြရပါသည်။ ဗလီထဲရောက်လျှင် မည်သူမဆို ကြိုက်ရာနေရာတွင် နေရာယူဝတ်ပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သူ့ကိုမျှ ပုံသေနေရာပေးခြင်း နှင့် အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်း မရှိသဖြင့် မည်သူမဆို မွတ်စလင်ယောင်ဆောင်ကာ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်လေ့လာအဖြေရှာနိုင်ပါသည်။ အလဇ္ဇီရဟန်းတို့ စွပ်စွဲသလိုမျိုး အလျဉ်း မဟုတ်ကြောင်း အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် အထင်းသားမြင်နိုင်ပါသည်။
၃။ ယခု ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့နေရသော အဖြစ်အပျက်များ၏နောက်ကွယ်၌ လက်ရှိအာဏာပိုင်အချို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု တပည့်တော် ထင်မြင်ယူဆပါသဖြင့် ၊ တပည့်တော်၏ လုံခြုံရေးအတွက် နာမည်ရင်းကို မဖော်ပြနိုင်သည်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ဘုရား။ ယင်းသို့ ယူဆသုံးသပ်မိရသည့်အကြောင်းမှာ —-
(က) လူ့သက်သေအထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား၊ အခွေ(ရုပ်ရော၊ အသံပါ ) အထောက်အထားများရှိပါလျက် ထိုသို့ လူသိရှင်ကြား လုပ်ကြံသွေးထိုးဟောပြောနေသော အလဇ္ဇီရဟန်းများကို သက်ဆိုင်ရာမှ ဘာတစ်ခုမျှ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လုံးဝ မရှိခြင်း။
(ခ) ၈-၁၂-၂၀၁၃ (စနေနေ့)၌ ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့၊ အောင်မြေသာယာကျောင်းတွင် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးအခမ်းအနား၌ ယူနီဖေါင်းဝတ်ရဲအရာရှိ ထိုင်နားထောင်သည်ကိုပင် တွေ့မြင်ရခဲ့ရပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေး၌ တည်ဆဲဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကာ ယင်းတို့က အာဏာရှင်ပုံစံနှင့် လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်များကိုရော ၊ သမ္မတအဖွဲ့ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့များကိုပါ ထီမထင်ကြောင်းပြသ၍ ၄င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများကို အများပြည်သူမှလိုက်နာရန် ဥပဒေသဖွယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင် မည်သည့် အရေးယူဟန့်တားမှုမျှ မရှိသေးပါ။
(ဂ) အလဇ္ဇီ ပညာဝရ၏ ပြောကြားမှု၌ " မနေ့က (၁၅-၃-၂၀၁၂)၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ကတော်နဲ့ တွေ့လို့တောင် ပြောလိုက်သေးတယ် " ဟု တရားပွဲတွင် တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားရာ အလဇ္ဇီရဟန်းတို့နှင့် အာဏာပိုင်အချို့ ဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆက်ဆံမှုများ ရှိနေကြောင်း ငြင်းဆိုမရအောင်ပေါ်လွင်သွားခြင်း . . . စသည့် စသည့် အချက်များကြောင့်ဟု တင်လျှောက်လိုက်ရကြောင်းပါ ဘုရား။
Posted: 24 Mar 2013 12:52 AM PDT
In this Thursday, March. 21, 2013 photo, local residents walk onaroad nearaburning building following ethnic unrest between Buddhists and Muslims in Meikhtila, Mandalay division, about 550 kilometers (340 miles) north of Yangon,
In this Thursday, March. 21, 2013 photo,agroup of people try to destroyabuilding in Meikhtila,
Posted: 24 Mar 2013 02:37 AM PDT
UMNO mengatakan mereka pejuang agama dan pahlawan melayu pada realitinya merekalah yang sememangnya menjadi pengkhianat agama serta melayu.
Kesian lah melayu selama ini tak sudah-sudah di tipu UMNO dan macai mereka... berjuang demi Melayu konon tapi tidak sedar atau buat-buat tidak sedar selama ini di perbodohkan.
Bila Parlimen dikuasai bukan Melayu UMNO melalak kononnya menjaga ketuanan Melayu sedangkan hakikatnya UMNO yang mengurangkan kuasa Parlimen Orang Melayu dengan menambah kerusi Parlimen kepada bukan melayu semasa persempadanan dahulu.
Yang mengajar orang kafir menjadi biadap kepada Islam puak UMNO Sendiri. Jika UMNO yang mengaku Islam memperlekehkan Islam, bukankah tindakan UMNO tersebut akan dicontohi orang bukan Islam. -fb pejuangkelantan
Posted: 23 Mar 2013 11:07 PM PDT
MEIKHTILA, Myanmar (AP) — The United Nations' top envoy to Myanmar on Sunday touredacentral city that was destroyed in the country's worst explosion of Buddhist-Muslim violence this year, visiting some of the nearly 10,000 people forced from their homes after unrest left dozens of corpses in the streets, some of them charred beyond recognition.
The visit to Meikhtila of Vijay Nambiar, the U.N. secretary-general's special adviser on Myanmar, came one day after the army took control of the city to enforceatense calm after President Thein Sein orderedastate of emergency here.
The bloodshed marked the first sectarian unrest to spread into the nation's heartland since two similar episodes rocked western Rakhine state last year. It is the latest challenge to efforts to reform the Southeast Asian country after the long-ruling military ceded power two years ago toacivilian government led by retired army officers.
As in Rakhine, minority Muslims again appeared to have borne the brunt of the violence. At least five mosques were set ablaze in Meikhtila, the majority of homes and shops burned in the city belonged to Muslims, and most of the displaced were Muslim.
During his trip, Nambiar visited some of the thousands of Muslim residents atacity stadium where they have huddled since fleeing their homes. He later visited around 100 Buddhists atalocal monastery who have also been displaced.
No new violence was reported overnight, but residents remain fearful.
"The city is calm and some shops have reopened, but many still live in fear. Some still dare not return to their homes," said Win Htein, an opposition lawmaker from the town.
Late Saturday, the government put the death toll at 32, according to state television, which reported that bodies had been found as authorities began cleaning up the area.
Residents complained that police had stood by and done little to stop the mayhem. But "calm has been restored since troops took charge of security," said Win Htein.
Local businessman San Hlaing said he counted 28 bodies this week, all men, piled in groups around the town.
Khin Maung Swe,a72-year-old Muslim lawyer who said he lost all his savings, complained that authorities did nothing to disperse the mobs.
"If the military and police had showed up in force, those troublemakers would have run away," he said, inspecting the remains of his damaged home.
Posted: 23 Mar 2013 10:37 PM PDT
မိတ္ထီလာအရေးမှာ လူအုပ်နဲ့ မဖြေရှင်းဘဲ အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ရှင်းနိုင်မလဲ၊ တခါ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အဓိကရုဏ်းတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ အသင့် မဖြစ်သေးဘူးလား။ ဒေသခံတွေနဲ့ ဘီဘီစီ သောတရှင်တွေက အားပါးတရ အချေအတင် ဆွေးနွေးကြလို့ လူထုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် ထောက်ထားစရာ၊ စဉ်းစားစရာတွေကိုလည်း ပြောပြထားကြတာပါ။
Posted: 23 Mar 2013 10:20 PM PDT
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးရေချိန် မြင့်သထက်မြင့်လာနေသည်။ ယခင့်ယခင်က မွတ်စလင်မ်မုန်းတီး ရေး စာပေများကို အစိုးရနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်အဖွဲ့ အစည်းများက ဖြန့် နေကြောင်း ကြားဖူးသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မတွေ့ ဖူးမမြင်ဖူးခဲ့။ အင်တာနက်ခေတ်စားလာသော ယခုခေတ်သယမတွင် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများ အားပုတ်ခတ်ရေးသားသော အီးမေးလ်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာများ၊ ကော်မန့် များကို နေ့ စဉ်လိုလို မြင်နေ ကြားနေရသည်။ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည် သူများကိုမေးခွန်းတချို့ မေးချင်သည်။ မေးခွန်းများ မမေးခင် ကျနော့်အကြောင်း ပြောပါမည်။
ကျနော်သည် မြန်မာပြည်တွင်မွေးဖွားသော မြန်မာပြည်သားတယောက်ဖြစ်သည်။ မနေ့ တနေ့ကမှမြန်မာပြည်သို့တိုင်းတပါးမှ ၀င်ရောက်လာသူမဟုတ်။ အိန္ဒိယမှ ရွေ့ ပြောင်းဝင်ရောက်လာသော မိဘများမှမွေးဖွားသည်မဟုတ်။ အဘိုးအဘွားမဆို သူတို့ ၏မိဘများပင် ဗမာနှင့် တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။
ကျနော်သည် မြန်မာ့မြေပေါ်မွေး မြန်မာ့မြေပေါ်တွင်ကြီး မြန်မာကျောင်းတွင် ပညာသင်၍ ဗမာ စကားပြောသည်။ ဗမာစာပဲတတ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်အတွက် မြန်မာလိုဝတ်သည်၊ မြန်မာပြည်ကိုချစ် သည်။ မြန်မာပြည်သည် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ မြန်မာလူမျိုးသည် ကိုယ့်လူမျိုးဟုခံယူသည်။
ကုလားစကားဟုခေါ်သော တောင်အာရှစကားများမတတ်။ ရေးလည်းမရေးတတ်၊ ဖတ်လည်းမတတ်ပါ။ အိန္ဒိယ လည်း မရောက်ဖူး၊ ဆွေမျိုးလည်း မရှိပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရေး စီးပွားရေးလည်း ကျနော်နဲ့ လည်း မဆိုင်ပါ။ မြန်မာ ပြည်သာလျှင် ကျနော့် အမိမြေဖြစ်သည်။မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းစေချင်သည်။ ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်စေလို သည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာနှင့် ဗလီသွားတာပဲကွာသည်။ ကျန်တာကတော့ နေပူလည်းအတူတူ မိုးရွာလည်း အတူတူ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတက် လည်းအတူတူ၊ လုပ်အားပေး သွားရလည်း အတူတူဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲ မီးပျက်လျှင် ကျနော့်အိမ်တစ်အိမ်တည်း ကွက်ပြီး လျှပ်စစ်မီးမလင်းသကဲ့ သို့ နွေရာသီရေရှားလျှင်လည်း ကျနော့်အိမ်ရေတွင်း တစ်တွင်းတည်းကွက်ပြီး ရေမထွက်ပါ။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သည့် တိုင်းပြည်တွင် ကျနော့်တစ်အိမ်တည်း အခွင့်အရေးထူးတွေမရပါ။
ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် – အစ္စလာမ်သာလျှင်မှန်ကန်ပြီး တခြားဘာသာတွေ မှားသည်ဟု တခါကမှ မပြောဖူး။ ယုံ လည်းမယုံကြည်ပါ။ ကျနော့်မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း စည်းရုံးဝါဒဖြန့်နေသူများမရှိပါ။ ကျနော်သူငယ်ချင်းများတွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားပြီး အစ္စလာမ်ဝါဒ ဖြန့် ချိနေသူများမတွေ့ ပါ။ ဘာသာတိုင်း သူ့အယူအဆ နှင့်သူဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားဘာသာများကို လေးစားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်နေထိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ ရှုရမည်ဖြစ်ကြောင်း အာပေါက်အောင် ပြောနေသူများသာဖြစ်သည်။ အများနည်းတူကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ကုလားဟုခေါ်ကာ နှိမ့်ချနေမှုများကို ရပ်တံ့ပေးရန် တောင်းဆိုနေသူများသာဖြစ်သည်။ ဘာသာမတူသူများအကြား နားလည်မှုရစေရန်၊အမုန်းတရားမပွားစေရန် ကြိုးစားနေသူများ လိုလားနေသူများဖြစ် သည်။
ကျနော်အပါအ၀င် ကျနော့်မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အွန်လိုင်းတွင်သိကျွမ်းရသော မွတ်စလင်မ်သူငယ်ချင်း များထဲတွင် ရှင်ဂေါတမ ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ သံဃာတော်များ ၊ မယ်သီလရှင်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာဝင်များကို နှုတ်နှင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်နှင့်ဖြစ်စေ နှိမ့်ချ စော်ကားနေသူများမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓ အမည်ခံ နိုက်ကလပ်များ၊ Rude Buddha ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်များကိုပင်မလုပ်သင့်ကြောင်း ယူဆသူများ၊ စိတ်မကောင်းသူများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်များကိုပင် ကန့်ကွက်ကြောင်းကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်များရှိပါသည်။
သို့ သော် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအား အမေနှမများကိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ပုံများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နစ်နာအောင် အမျိုးမျိုး စော်ကားနေသည်ကို နေ့ စဉ်နှင့်အမျှတွေ့ ရသည်။ ဘိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ပါသည်ဆိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များပင် ရိုင်းရိုင်းပျပျ စကားလုံး ရင့် ရင့်သီးသီးများဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ပြည်သူများအား လူမြင်သူထင် ဆဲဆိုနေသည်။
ဤမျှမက ဆုတောင်းဝတ်ပြုဆောင်များကို ဖျက်ဆီးသူများက တရားဥပဒေကင်းစွာဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်ကို ၀မ်းသာအားရ အားပေးအားမြောက်ပြု ရေသားပြောဆိုနေကြသည်။
ပြောဆိုနေကြသည်များထဲတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ အချက်အလက်မှန်များဖြင့် အပြုသဘောပြောဆိုသည်မဟုတ်ဘဲ စိတ်အထင်ဖြင့် ဘာသာစွဲဖြင့် အမုန်းတရား သက်သက်ဖြင့် ပြောဆိုနေကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ နေရသည်။ အချို့ ဆိုရင်မွတ်စလင်မ်အကြောင်း မဆိုနှင့် မွတ်စလင်မ်မိတ်ဆွေ (သို့ ) အိမ်နှီးချင်း (သို့ ) အသိတယောက်မှ မရှိ ပေ။ ကြားဖူးနားဝဖြင့် အမုန်းတရားပွားနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများအား မုန်းတီးနေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူများသို့ မေးခွန်းများမေးချင်သည်။
(၁) သင့်တွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ် သူငယ်ချင်း (သို့ ) အသိရှိပါသလား။ သင်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးပါသလဲ။
(၂) သင့်ကို သူက ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မှားနေပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာ သာလျှင်မှန်သည် ဟု စည်းရုံးဖူးပါ သလား။
(၃) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓ သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို သင်သိသောမြန်မာမွတ်စလင်မ်တဦးဦးက ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ စကားလုံးအရေးအသားဖြင့်ဖြစ်စေ စော်ကားဖူးပါသလား။
(၄) သင်လိုအပ်နေချိန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ ဆိုကာ လျစ်လျူရှု ခွဲခြားဆက်ဆံခံရဖူးပါသလား။
ကျနော်ကြီးပြင်းလာသည့် မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အခြားဘာသာကိုစော်ကား စည်းရုံးနေသည့် လူများမရှိပါ။ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိပါ။ ကျနော် လိပ်ပြာသန့် သည်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူသည် ကိုယ်တိုင် စော်ကားခံရဖူး လျှင်ဖြစ်စဉ် အချက်အလက်ဖြင့် ကျနော့်ထံ ဆက်သွယ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အများ စုဖြစ်သည့် အလယ်အလတ် မွတ်စလင်မ်ပြည်သူများနှင့် လက်တွဲ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖက်မှ ရပ်တည်ပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအား စော်ကားခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း၊ အချို့ စွပ်စွဲသည့် "လူမဆန်စွာ စည်းရုံးခြင်း" ဆိုသည့်ပြသနာကို လက်တွဲ တိုက်ဖျက်မည်ဟု ကတိပေး သည်။
ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစော်ကားသကဲ့သို့ကျနော့်သာသနာနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပြည် သူများအား ကြားဖူးနားဝဖြင့် မုန်းတီးနေခြင်း၊ စော်ကားပြောဆိုနေခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းများကို ရပ်တံ့ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted: 23 Mar 2013 09:59 PM PDT
I can wax lyrical about my beloved dog from dawn till dusk and know that many other pet lovers out there can do the same.
Truly, dogs are the best friends that man can have because of many reasons. As I grow older, I am increasingly more discerning when it comes to human relationships. Suffice to say, I trust few and talk to even fewer to preserve my sanity. Frankly, I have never been happier this way. The most unusual trend is that all the new friends I have made in the last one year are over 65 years of age and for that I am most grateful because they are ever willing to share their wisdom and life's precious lessons with me.
Coming back to the topic, I doth declare that Tiger IS my best friend for many reasons.
1. He is non-judgemental.
When I am late in giving him his meal for one reason or another, he does not complain nor does he judge me for being less responsible.
If I do not respond to his manja overtures, he still continues to love me and looks at me with the deepest most adoring eyes.
Even though my younger son has chosenavery dark piece by Prokofiev - Piano Concerto No2for his LTCL exam this year, Tiger still sits at his feet faithfully, tolerating the awful melody quietly. His ears twitch non-stop because the melody is so :-( and yet he loves my son enough to sit through the whole practice.
On the contrary, I grumble non-stop and unceasingly question why on earth he chose suchapiece and then once he begins his piece, I flee to my room, lock the door and hide....:-( CLICK HERE to listen to that piece which Nick said he chose (despite the unmelodious and dark nature of the piece) because he wanted to learn many techniques from that composition. *salute
This scenario alone has taught me LOTS about love and how important it is to be non-judgemental and not to condemn people. At the same time, I do admit that my decision to stop political blogging has helped me to develop positively as I don't look out for the negative side of topics but look at what can be done (realistically, not idealistically) to make our worldabetter place.
2. He is sensitive to my mood.
If I am inatensed or irritable mood, he stays away from me and does not nag, moralise or lecture. At the same time, when I call him, he responds and is there to listen to me or to make me happy just by being who he is.
3. He is faithful and true in all circumstances.
Regardless of whether I give him his favourite treats or not, he is always there for me, waiting for me when I come home, ready to greet me, jump on me and to wait for me to cuddle him and to tell him how much I love him.
4. Tiger is understanding and accepts change with no temper tantrums
On rainy days when he cannot go out for his walks, all I need to do is to tell him that he cannot have his usual romp because of weather conditions and then he will docilely sit in his favourite corner and look at me. Later, when he has to do his business, he will go to the bathroom on his own...
5. Tiger has taught my family to be more caring and sensitive to his needs.
Initially, we never said goodbye to Tiger when we left the house for errands etc. I did notice his sad expression and thought nothing of it but after two weeks, I would bid him goodbye and noticed he was less despondent...then I would let him listen to instrumental music to soothe his nerves :-) and upon my return, would find him sleeping quietly. Thereafter, I told my husband and son to always remember to pat his head and to tell Tiger that they were going out but would return soon to play with him. Indeed, it has really madeaworld of difference!
6. If anything, Tiger has taught me to be more loving and understanding and that above all else, happiness matters.
In my life, I have met all kinds of characters - and have little affinity for choleric personalities who:
..."can dominate people of other temperaments with their strong wills, especially phlegmatic types, and can become dictatorial or tyrannical. Many great charismatic military and political figures were cholerics. They like to be in charge of everything and are good at planning, as they often can immediately seeapractical solution toaproblem." Source: HERE
Tiger has reminded me that not everyone is like that and that regardless, we should just enjoy the joy that each day brings and fret not over such characters but to be happy at all times.
Suffice to say that I have never been happier since Tiger came into my life. I see life very differently and am constantly filled with many moments of joy, happiness and fulfilment knowing that even as I shower Tiger with love, affection and sometimes spoil him now and then, his devotion and love for my family and me is simply incomparable. His faithfulness and dedication to guarding the home is astounding and barks only when necessary.
Today, I surfed the net for stories about dogs and came across this site which warmed my heart knowing that pets are real blessings to their owners.
The story that I love most and really made me cry quite unabashedly is:
Dog of the Year Photo Gallery- Photo 18
Of course, all the other stories are beautiful and most inspiring so please check out all 19 stories.
Havealovely day and if you are thinking of gettingadog oracat, please adopt one rather than buy one. There are many owners out there who want to give away their pets for various reasons/circumstances so do ask around. I can assure you that the dividend for suchadecision is priceless!
Posted: 23 Mar 2013 09:53 PM PDT
မတ်လ ၂၃ ၊ ၂၀၁၃
မိထ္ထီလာမှ မီးရှို့ခံလိုက်ရသည့် ဗလီတလုံး (ဓါတ်ပုံ-ရိုက်တာ)
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ တစ်စတစ်စ ကြီးထွားလာမှုကို အရေးယူပြီး၊ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တူရကီနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။
"မိတ္ထီလာတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများအား ချက်ချင်း ထိန်းချုပ်ပေးရန်၊ ထိုအကြမ်းဖက်မှုများကို ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးပေးရန်နှင့် အခြားဒေသများသို့ ပျံ့နှံ့မသွားအောင် တားဆီးပေးရန် တူရကီနိုင်ငံမှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။"ဟု စနေနေ့က တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ုလွန်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အုပ်စုမှ မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်များကို မီးရှို့ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သောကြာနေ့ကလည်း မိတ္ထီလာမြို့ အပြင်ဘက်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ နေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်များကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြလေသည်။
Posted: 23 Mar 2013 09:50 PM PDT
M-Media မတ်လ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၃ www.asiasentinel.com
မွတ်စလင်များ မြို့ပြင်သို့ထွက်သွားနေကြသည်ကို အလဲဗင်းမီဒီယာမှ တင်ပြထားပုံ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်လေ့ရှိတဲ့ ဒေါက်တာမောင်ဇာနည်က ရခိုင်အရေးအခင်းကို နာဇီလှုပ်ရှားပုံမျိုးလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို မြန်မာအချို့က လိုတာထက် ပုံကြီးချဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အနောက်တိုင်းသားတချို လည်း ဒီလိုအသုံးအနှုံးမျိုးကို ရှောင်ခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခုမိတ္ထီလာမှာ မွတ်စလင်ဆန့် ကျင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တော့ ဒေါက်တာဇာနည်မှန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေသလိုပဲ။ မွတ်စလင်ရွှေ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အချင်းများရာကနေ စလိုက်တာဟာ လူပေါင်း ၃၀ ထက်မနည်းသေပြီးဖြစ်သလို၊ ဗလီ ၁၀ လုံးထက်မနည်း၊ အစ္စလာမ့်စာ သင်ကျောင်းတွေ၊ အိမ်တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ မီးခိုးတွေ၊ ပြာတွေနဲ့ မီးလောင်တစပြင်ကြီးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ္ထီလာကနေ မွတ်စလင်တွေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ ထွက်ပြေးကြရတယ်။
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကတော့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အလဲဗင်းက မြို့ပြင်ကို မောင်းထုတ်ခံနေရတဲ့ မွတ်စလင်လူတန်းရှည်ကြီးပုံကို ဖော်ပြသွားခဲ့တယ်။ ဒီပုံထဲမှာ ထူးခြားတာက ကလေးတွေ၊ မိန်းမတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအားလုံး သူတို့လက်တွေကို မြှောက်ထားကြရတယ်။ သူတို့ကို လုံခြုံရေးတွေက ကာရံပေးထားတယ်။ အနီးအပါးမှာတော့ ဒုတ်ဓားကိုင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ရာနှစ်ချီပြီး ထွက်သွားနေတဲ့ မွတ်စလင်လူတန်းကြီး ကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ဒါက ဘာကိုအမှတ်ရစေသလဲဆိုရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျူးတွေကို ဂျာမန်စစ်သားတွေ ၀န်းရံပြီး နာဇီစစ်စခန်းတွေ ဆီ ပို့နေကြတဲ့ ပုံမျိုးကိုပါပဲ။
ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုကပဲ မြန်မာပြည်က ဖြစ်စဉ်တွေသည် နာဇီဖြစ်စဉ်နဲ့ ဆင်တူနေတယ်လို့ ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါ။ အရေးအခင်းလှုံဆော်ရေး သမားတွေ ရဲ့ လှုပ်ရှားပုံတွေ၊ အကြံအစည်တွေ၊ အထူးသဖြင့် လူမျိုးရေး-ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ အကြံအစည်တွေက ဟစ်တလာလက်အောက်ခံ နာဇီဂျာမနီရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်တွေ အတိုင်းပါပဲ။
ကနဦးကတော့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ တကယ့်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့သင့်တဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံးက ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုပါပဲ။ ဒီ ၉၆၉ ဆိုတာကို ဒီနှစ်အစောပိုင်းက တီထွင်လိုက်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်လို ဂဏန်းတွေနဲ့ အတိတ် သဘောင်ကောက်တဲ့နည်း အလွန်တွင်ကျယ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ၉၆၉ က တကယ့်ကို စွမ်းအားထက်တော့တာပါပဲ။ ဒီ ၉၆၉ ကို အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးတွေက ဦးဆောင်ပြီး လှုပ်ရှားကြတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာ ၀ီရသူနာမည်နဲ့ ထင်ပေါ်နေတဲ့သူတစ်ဦးလည်းအပါအ၀င်ဖြစ်တယ်။ ၉၆၉ ဆိုတာကတော့ ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါးနဲ့ သံဃာဂုဏ်တော် ၉ ပါးဆိုပြီး ယူထားကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် ၉၆၉အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ၉၆၉ သည် ၇၈၆ အတိုင်း လိုက်လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ဂဏန်းကို အာရှတောင်ပိုင်းက မွတ်စလင်တွေ သုံးကြတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က အလ္လာဟ်၏နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါသည် ဆိုတာကို ဂဏန်းနဲ့ ဖော်ပြထားတာပါ။
မြန်မာတွေက ဒီ ၇၈၆ ကို အဓိပ္ပါယ်တမျိုးဖွင့်တယ်၊ ၇+၈+၆ = ၂၁ ဆိုတော့ ၂၁ ရာစုမှာ မွတ်စလင်တွေ လွှမ်းမိုးရမယ်၊ ဒါမျိုး အလွဲအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တာပါ။ ဒီတော့ ၇၈၆ ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ၉၆၉ စတစ်ကာတွေကတော့ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အလံ လိုဖြစ်နေပြီး မြို့အတော် များများမှာ အဲဒီစတစ်ကာတွေ တွေ့နေရတာပဲ။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကြီးကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရနေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကတော့ ၉၆၉ စတစ်ကာ ကပ်ထားတဲ့ တက္ကစီတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေကို တွေ့နေရတယ်။
၉၆၉ လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ သူတို့လှုပ်ရှားမှုကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့အသွင်နဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်တာပါလို့ ပြောတာပါပဲ။ လက်တွေ့ကတော့ ဒီလှုပ်ရှားမှုက ပွင့်လင်းသိသာတဲ့ မွတ်စလင်ဆန့် ကျင် လှုပ်ရှားမှုကြီးပါပဲ။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပြခဲ့တဲ့ လူသားအားလုံး တပြေးညီသဘော တရားမျိုးကို ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုကြီးက ဆက်လက်ပြီး ဟောပြောတင်ပြနေတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ မြို့ကြီးများအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားမှာ ၉၆၉ ကော်မတီတွေရှိတယ်၊ သူတို့က အစီအစဉ်တွေ၊ တရားပွဲတွေ လုပ်ကြတယ်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာအုပ်တွေ စီဒီတွေ ဖြန့်ကြတယ်။
သူတို့ကမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို မွတ်စလင်တွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတယ်လို့ စွပ်စွဲကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွတ်စလင်တွေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ရဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း၊ ၉၆၉ တံဆိပ်ကပ်ဆိုင်တွေ မှာပဲ ရောင်းဝယ်ရမယ်၊ ဒါမျိုးဆိုတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းပဲ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး အဓမ္မကို စေခိုင်းနေတယ်။ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ကို ဘုန်းကြီးတွေဝိုင်းရိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြည်တွင်း သတင်းတွေမှာ တွေ့နေရတယ်။
အခုထိတော့ ၉၆၉ တံဆိပ်တွေကို စတိုးဆိုင်တွေ၊ အလတ်တန်းစား စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့ စားသောက်ကုန်ရောင်း တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ တွေ့နေရတယ်။ ၉၆၉ အကြောင်းဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးတရားပွဲကတော့ မှိုပေါက်သလိုကို ပေါနေတော့တာပဲ။ ဒီလိုတရားပွဲ ပေါသလို၊ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်တွေ စတစ်ကာတွေကို ကုန်စုံဆိုင်တွေ၊ ဖုန်းဆိုင်တွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းကြတယ်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး တရားခွေတွေကို လမ်းတွေမှာ ဖွင့်ကြတယ်။ ရန်ကုန်က ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာတောင် ဖွင့်ကြတယ်။ လိုရင်းကတော့ ၉၆၉ သတင်းက တနိုင်ငံလုံးပတ်သွားနေတဲ့ အဲဒီ ၉၆၉ လှုပ်ရှားသူတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေကြောင့်ပဲ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။
မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေကို အန္တရာယ်ရှိ နိုင်ငံခြားသားတွေလို့ ပုံဖော်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကို နယ်မြေလုဖို့သက်သက်နဲ့ ၀င်လာကြသူတွေလို့ တင်ပြတယ်။ သူတို့တွေကပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ကြတယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်။ လူ့အသိုင်းအ၀န်း အတွင်းက ယဉ်ကျေးမှုကို အစ္စလာမ့်အကြောင်း မကောင်းတာတွေပြောပြီး ဖျက်ဆီးပစ်နေကြတယ်။ ဒီလို အစ္စလာမ်အကြောင်း မကောင်း ပြောတဲ့အထဲမှာ မိန်းမတွေ ကို မြှူဆွယ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာကို လုယူတဲ့အကြောင်း စတာတွေ ပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေကို ခွေးနဲ့နှိုင်းပြီး သခင့်လက် ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ခွေးတွေ၊ သူတို့ကို မောင်းမထုတ်ရင်၊ ဒီလူလိမ်တွေ၊ အကျည်းတန်တွေ၊ အရိုင်းအစိုင်းတွေ ကို မောင်းမထုတ် ရင် မြန်မာလူမျိုးတမျိုးလုံး ပြုတ်သွားရချည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုက နားထင်ထိ ရောက်နေတယ်။
သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဒုက္ခနွံထဲ ဆွဲထည့်တာက အခရာပဲ။ ပုံမှန်ဝါဒဖြန့်ချက်ကတော့ မွတ်စလင်တွေသည် နိုင်ငံနဲ့ အသိုက်အ၀န်းတစ်ခုလုံး ကို ဖျက်လို့ဖျက် ဆီးလုပ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရှင်ဥာဏိဿရကိုယ်တိုင် မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်း ဒုတိယနေ့၊ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ဒီဗွီဘီကို – "မွတ်စလင်တွေသည် ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘာသာရေး တင်းမာမှုကလည်း မွတ်စလင်တွေကြောင့် ပဲဖြစ်တာကြောင့် အိမ်ရှင်တွေကို လေးစားရမယ်၊ ယဉ်ကျေးပြရမယ်၊ " ။ အဲဒါမျိုးပြောခဲ့တယ်။
တခြားအရေးပါတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့ မွတ်စလင်ဆန့် ကျင်ရေး စာအုပ်တွေအားလုံးက အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေချည့် နာမည်မှည့်ထားကြတာပဲ။ ဒါမျိုးစာအုပ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဖြန့်ချိခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် လမ်းညွှန်တွေပဲ။ အဲဒီထဲမှာ မွတ်စလင်တွေက အလိုမတူဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေကို လက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို တင်ပြထားတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို အစ္စလာမ်ထဲ သွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်၊ မွတ်စလင်တွေက တကမ္ဘာလုံးကို စီးပွားရေးအရ သာမက နိုင်ငံရေးအရရော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရပါ ၀ါးမြိုဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဒါမျိုးတွေ ရေးထားတယ်။ မွတ်စလင်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်မတားဆီးရင် သူတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကို သိမ်းလိုက်လိမ့်မယ်၊ သူတို့အင်အားမှေးမှိန်စေဖို့ သူတို့ရဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို ဖျက်ဆီး ရမယ်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ကို သွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်၊ ဒါမျိုးတွေ ၀ါဒဖြန့်တယ်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို သွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်ရီပြောခဲ့ တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး နာဇီဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်လှုပ်ရှားမှုမျိုးက အထောက်အပံ့ကောင်းကောင်းမရဘဲ ဆက်ပြီး အဓွန့်ရှည်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေ ရာထောင်ချီပြီး ၉၆၉ တရားတွေနားထောင်ကြတော့ အင်အားကောင်းလာတယ်။ ဒီလိုမျိုးတရားတွေက လူထုလက်ခံယုံနဲ့ ပြီးသွားတာမှ မဟုတ် တာ၊ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ၉၆၉ တရားပွဲအပြီး မွန်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်ဆိုင်တွေကို ဖျက်ဆီးတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်လို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ၉၆၉ လှုပ်ရှားသူတွေက မြန်မာစာလုံးတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ ဖွဲ့ပြီး ၀ါဒဖြန့်ကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အဖွဲ့ဝင်အရေအ တွက်က ၉၀ ကနေ ရာဂဏန်းထိရှိတယ်။ ဒါပြင် MNMC ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာကတော့ စံချိန်တင် (Likes) ပေါင်း ၁၅၄၉၉ ရှိနေတယ်။ မြန်မာပြည်ကဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကွန်မန့်တွေကတော့ သူတို့အ တွက် ပေါ်ပြူလာအထောက်အပံ့တွေဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းက မွတ်စလင်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်နှစ်ခုမှာ ပေးထားကြတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ဒီမှတ်ချက်တွေက ဘယ်လောက်ထိ တာသွားနေလဲ၊ ကြီးကျယ်နေလဲဆိုတာ သိသာအောင်လို့ပါ။
ပျော်တယ်ဟေ့ပျော်တယ်ဟေ့၊၊ ခွေးမျိုးတွေ၊ ခွေးသားတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာမသားတွေကို မောင်းထုတ်ကြစို့
သတင်းကောင်းပဲ၊ မွတ်စလင်အားလုံး သေရမယ်။
၂၀ ပဲသေတာ နည်းတယ်ကွ၊ သူတို့အားလုံးသေရမှာ။ မြန်မာပြည်က ဗလီအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။
အတိုးချုံးပြောရရင်တော့ ဒေါက်တာဇာနည်ပြောနေခဲ့တဲ့ နာဇီလှုပ်ရှားမှုမျိုးက အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်နေကြသူတွေကတော့ နိုင်ငံအနှံ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်ရနေကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး အရေးပေါ်အချိန်မှာ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေက အုံနဲ့ကျင်းနဲ့၊ မုန်းတီးရေးအခြေခံ သတင်းတွေ ဖြန့်နေကြတယ်။
ဒီလိုမျိုး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ပြောဆိုတင်ပြတာမျိုးတွေမလုပ်ရင်တော့ လူမျိုးစုအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေတဲ့ မြန်မာပြည်လို နေရာမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လူမျိုးရေးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေက ထိန်းလို့မရအောင် ဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပါပဲ။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စကားများတာ ကလေးကနေ အဆုံးသတ်ရလဒ်ကတော့ဗျာ၊ မိတ္ထီလာတမြို့လုံးမှာ ကြီးကျယ်တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။း ဒါက တပ်လှန့်နှိုးဆော်မှုတစ်ခုပါပဲ။
Posted: 23 Mar 2013 09:47 PM PDT
ပြောကြတယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေး
ကမ္ဘာမှာ သူတို့လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်တတ်သယောင်
ဗလပွ ဟိုနား ဒီနား
၉၆၉ ထိပ်စီးနဲ့ 
ကြားနေ အမှန်တရား သတင်းသမားတွေဆိုလား
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား မှ အားမနာ ကုလားမုန်းတဲ့ မိစ္ဆာစိတ်နဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာရေး ညာရေး
ခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာ
ပိပြားနေတဲ့ ကုလားတွေ မပါပါလား
မရေရာတဲ့ကုလားတို့ဘ၀တွေအတွက်
တလုံးတလေ တဖွဲ့တလေမှ မပါတာ
ကုလားတွေ လက်နက်မကိုင်သေးလို့ 
လုပ်ကြပေါ့ ခင်ဗျားတို့ သာတဲ့အချိန်
ခင်ဗျားတို့ ချစ်တဲ့ ပြည်ကြီး
ကုလားခုတုံးလုပ်လို့နောက်ပြန်လှဲ
ငါ့လူမျိုး ငါ့ဘာသာ ငါ့သာသနာအတွက်။
လူ၊ ဘုန်းကြီး၊ မီဒီယာ၊ နိုင်ငံရေးသမား
တေလေကြမ်းပိုး၊ သူတောင်းစား၊ အဖျက်သမားတွေက
စုလို့ ပေါင်း အကြမ်းဖက်ရင်
သေမထူး နေမထူးလို့ 
ကျုပ်တို့ လို မျက်ရည်မကျမိစေနဲ့ ။
ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းရေး
ခင်ဗျားတို့မွမချေချင်စမ်းပါနဲ့ ။
နဲနဲရ များများကြွတဲ့ခင်ဗျားတို့ 
နဲနဲလွတ်လပ်လာတဲ့ ကုလားကိုတမ်းဖိတဲ့ ခင်ဗျားတို့ 
ခင်ဗျားတို့ မျက်ရည်ပြန်စို့ တဲ့တနေ့ 
** ရေးသူ၏ ခံစားချက်သာဖြစ်ပါသည်။
Posted: 23 Mar 2013 09:46 PM PDT
Kerajaan Negeri menerusi program HAPPY atau Housing Assistance Programme Penang YES! 10% dan Penang Development Corporation atau PDC(80%), 10% oleh penduduk dan YB Pantai Jerejak Sim Tze Sin akan membelanjakan RM1.5 juta untuk mengecat semula 17 Blok Flat Jalan Tengah yang mengandungi 850 unit dan 5,000 penghuni serta6Blok Flat Mayang Pasir sebanyak 300 unit dan 1,000 penghuni.
Kedua-dua flat ini dibina oleh PDC 30 tahun yang lepas dan PDC telah bersetuju untuk menampung 80% daripada kos pengecatan untuk flat rumah kos rendah yang dibina olehnya. Menerusi program HAPPY kerajaan negeri bersedia menyumbang 10% dan baki 10% akan dipertanggungjawabkan oleh penduduk dan ADUN tempatan YB Sim Tzen Zin.
Ia juga menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri PR untuk membawa perubahan kepada kehidupan penduduk flat rumah kos rendah supaya mereka dapat hidup bermaruah menerusi program HAPPY yang mempunyai dana RM50 juta.
Posted: 23 Mar 2013 09:41 PM PDT
ကြီးစွာသော သင်ခန်းစာ ယူကြရမယ်..by Ko Navana M-Media
ရောင်းသူ ၀ယ်သူ အသံမတူတော့ ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်။ အဲဒီပဋိပက္ခကို လူမျိုးဘာသာ မတူကွဲပြားမှု အရောင်ဆိုးပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားပစ်ကြရာက ရန်မီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်ကုန်တယ်..။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြစ်မဲ့သူတွေ သေကြေပျက်စီး အတိဒုက္ခ ရောက်ကြရတယ်..။ ဒီပွဲ ဟာဘယ်သူမှ မနိုင်တဲ့ပွဲ..။ အကုန်ရှုံးတဲ့ ပွဲ..။ တတိုင်းတပြည်လုံး ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် ရစရာမရှိအောင် ရှုံးတဲ့ပွဲပဲ..။
အဓိကရုန်းကို ဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတာ အတွေ့အကြုံနည်းလို့ အခုလောက်ထိဖြစ်သွားတာ..ဘင်္ဂလီကိစ္စကနေ အစပြုလာတဲ့ အနာ မကျက်တာ..
ဘာသာရေးအခြေပြုတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ အားကောင်းမောင်းသန်ဖြစ်လာတာ..
စတဲ့အချက်တွေဟာ အခုပြဿနာရဲ့  အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ် မဟုတ်ဘူး..။
တကယ်က.. ဘာသာစွဲလူမျိုးစွဲတွေ သိပ်လွန်ကဲလွန်းနေတာနဲ့ မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အားနည်းမှုက
အခုအဖြစ်သနစ်တွေရဲ့  အကြီးမားဆုံး တရားခံပဲ။
အဲဒီအချက်ကို ပြေလည်အောင် မရှင်းနိုင်သရွေ့.. အခွင့်သာရင်သာသလို.. အလားတူ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တွေ
လူရှိနေသမျှ လူအချင်းချင်း တိုးတိုက်မိတဲ့ ပဋိပက္ခတွေဆိုတာ ရှိနေမှာပဲ။ အဲဒီပဋိပက္ခတွေကို ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲတွေနဲ့ အရောင်ဆိုးကြည့်နေသမျှ အခုလိုမျိုး အဖြစ်သနစ်တွေလဲ ဆက်ရှိနေမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲ။
မေတ္တာတရားတွေ ထုံမွှမ်းဖို့၊ ကရုဏာတရားတွေ ပွားစီးဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ပြည့်ဝဖို့ ဘာသာတရားတွေက ညွှန်ပြသင်ကြားသော်ငြား..အဲဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက် လာတော့..
မေတ္တာပျက်ဖို့၊ ကရုဏာမဲ့ဖို့၊ ကိုယ်ချင်းမစာ ဖို့ အားလုံးက အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကို အခုအဖြစ်အပျက်တွေက သက်သေခံနေတယ်။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဘာသာတရားအတွက်.. ဘယ်လောက်ရိုင်းပျရက်စက်ရပစေ ၀န်မလေး ဘူးဆိုတာ မပြေးသော်လဲ ကန်ရာရှိ- ငြင်းမရတဲ့ အချက်ပဲ။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရှိရေးဟာ အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် စိုးမိုးမယ့်တရားဥပဒေ ကို တရားသဖြင့် လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ရှိဖို့က ပိုပြီး အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။
အဲဒီ အသိသာ ရှိနေခဲ့ရင်.. အခုလိုမျိုး စက်ဆုပ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ..။
အဲဒီအချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိမြင်သေးသရွေ့.. မြန်မာ့မြေဟာ မတရားမှုတွေနဲ့ပဲ ဖုံးလွှမ်းရင်း ပြည်သူတွေ ရဲ့  ဘ၀တွေဟာလဲ အတိဒုက္ခတွေနဲ့ လုံးချာလည် လိုက်နေမှာပဲ..။
တရားဥပဒေမှာ ဘာသာခြားက ရိုက်နှက်ရင် တစ်မျိုး၊ ဘာသာတူက ရိုက်နှက်ရင် တစ်ဖုံ ရယ်လို့မှ မရှိဘဲ။ လူတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ယောက်ကို နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်တာဟာ.. ဘာသာတူတူ-မတူတူ မတရားတဲ့
လုပ်ရပ်အဖြစ်ကနေ.. တစ်ပြားသားမှလျော့နည်း ပြောင်းလဲသွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
အဲဒီအမြင်နဲ့ပဲ မတရားမှုမှန်သမျှကို တရားသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တုန့်ပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်။ လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ကြရမယ်။
ဆိုတော့..စတေးသွားရရှာတဲ့ အသက်အိုးအိမ်တွေ ဘ၀တွေ ကို ပြန်မရနိုင်တော့ပေမယ့်.. ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကနေ.. ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာယူကြရမယ်..။ ကြီးစွာသော သင်ခန်းစာ ယူကြရပါမယ်။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့  စိတ်ထဲမှာ ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲတွေ လျော့ပြီး လူကိုလူလိုမြင်တဲ့ စိတ်တွေ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားအောင် မဖြစ်မနေ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကြိုးစားကြရမယ်။
ပြည်သူ့နီတိ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေကို မီဒီယာပေါင်းစုံကနေ ပညာပေးကြရမယ်။ ကျေးလက်တောရွာ အနှံ့ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့  အနာဂါတ်အမျိုးသားရေး ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြရမယ်။
အဲဒီ ခရီးဟာ ဝေးကောင်းဝေးမယ်..။ လှမ်းဖို့ ခက်ကောင်းခက်မယ်။
သို့သော် အဲဒီခရီးကို မြန်မြန်ရောက်လေ.. ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေ မြန်မြန် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းလေလေဖြစ်ပြီး.. မရောက်ရင်.. မရောက်သလောက်.. အခုလို ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု-၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု-စိတ်ပျက်စက်ဆုပ်မှုတွေအောက်ကနလံထူနိုင်မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင်.. ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်ကိုးကွယ်.. အဲဒီခရီးကို လျှောက်လှမ်းကြရမယ်။
Posted: 23 Mar 2013 09:37 PM PDT
နေပြည်တော် မတ် ၂၃ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့က မတ် ၂၀ ရက်တွင် မိတ္ထီလာမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
(ဘာသာအသီးသီးမှ ဘာသာဝင်များသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်းနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သာသနာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကြေညာချက်)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့တွင် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရောင်းအဝယ် အငြင်းပွားမှုမှ အစပြုကာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းအသွင် ကျယ်ပြန့်သွားသည့် အရေးကိစ္စအပေါ်၌ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ သာသနာ ခေါင်းဆောင်များမှ ဆုံးရှုံးထိခိုက် နစ်နာသွားသူများအပေါ် များစွာထောက်ထား၊ စာနာ၊ ကရုဏာထား၍ ဤသဘောထား ကြေညာချက်ကို အတူတကွ ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
၁။ ရှေးဦးစွာ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များအား ယခုအခါ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ အသွင် ဖြစ်နေသော အရေးကိစ္စကို ပြေလည်ပြေပျောက် ငြိမ်းချမ်းသွားစေရန် မေတ္တာရှေ့ထား၍ ကာကွယ်တားဆီးပဲ့ပြင် ဆုံးမဩဝါဒများ ချီးမြှင့်ပေးပါရန် ရိုသေလေးစားစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ ဘက်၌လည်း အမှားများရှိပါက ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါရန် ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။
၂။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း လုံလောက်သော လုံခြုံရေး အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် ဒုက္ခရောက်နေကြသော နှစ်ဖက်ပြည်သူများကို လုံခြုံရေး အကာအကွယ်များ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်၊ ဥပဒေကြောင်းမှ လိုအပ်သလို စစ်ဆေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် အဆိုပါကိစ္စများကို ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။၃။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်ကြသော ဘာသာကြီး (၄)ပါး အပါအဝင် ဘာသာဝင် အသီးသီးမှ မိမိတို့ ဘာသာဝင်အသီးသီးကို ဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင်ကြဖို့ ဆုံးမစကားများကို ပြောကြားပေးပါရန်၊ မေတ္တာကို အခြေခံ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ကြပါရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိရေး စောင့်ထိန်းပေးကြပါရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ သတင်းမီဒီယာများ၊ စာနယ်ဇင်းများမှလည်း ပြည်သူတို့ သိသင့်သော မှန်ကန်သည့် သတင်းများကိုသာ ထုတ်ပြန်ပေးသကဲ့သို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေနိုင်သော ကောလာဟလ သတင်းများကို တားဆီးပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၅။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ရာ မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခ အတားအဆီးမျိုးစုံသည် အသွင်ပေါင်းစုံဖြင့် နိုင်ငံတော် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုဘဲ ကောင်းစွာသော အသိ၊ သတိများဖြင့် တားဆီးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted: 23 Mar 2013 09:33 PM PDT
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ရန် နှိုးဆော်နေမှု သတိပြုမိစေရန် February 27, 2013
ဆွမ်းလောင်းအသင်းအား အကြောင်းပြကာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေသော လူ တစ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်များ ကို တင်ပြလိုပါတယ်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်လာနေရာ တချို့သော အာဏာရှင် ဟောင်း နွယ်ဖွားများက ရပ်ရွာအေးချမ်း တည်ငြိမ်မှု မရှိစေရန် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း များဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေမှုများ ရှိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် (ဃ) ရပ်ကွက်၊ မေဓါဝီလမ်းရှိ အမှတ်( ၄ ) အ.လ.က ကျောင်း မျက်နှာစာရှိ နှစ် ကျိပ် ရှစ်ဆူ ဘုရား ပူဇော်သည့် မဏ္ဍပ်သည် ပူဇော်လှူဒါန်းမှု ပြီးသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုထိ မဏ္ဍပ်အား မဖျက်သိမ်းပဲ ထားရှိကာ ညပိုင်း လူခြေတိတ်ချိန်တွင် ယာယီမဏ္ဍပ်အဖြစ်မှတဆင့် အခိုင်အမာ တည်ဆောက်လိုက်ကြပါတယ်။
ထိုကဲ့ သို့ လုပ်ဆောင်ရန် ကျောင်း၏ ခွင့်ပြုချက်လည်း မရှိပါ။ ထိုပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ညနေပိုင်းမှ စတင်ကာ အဆိုပါ မဏ္ဍပ်မှာ အသံချဲ့စက် အသုံးပြု၍ ဘာသာရေး အဓိကရိုဏ်းဖြစ်စေသော စကားများ ဟောပြောလှုံ့ဆော်မှုများကို ရပ်ကွက်နေ တချိန်က မဆလ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ( စစ) ဆေးတိုက် ပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့်မှ ဦးဆောင်ကာ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ကာ ဘာသာရေး အဓိကရိုဏ်းဖြစ်စေသော ဟောပြောမှုများလုပ်နေသောကြောင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများက အလွန် စိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ မဏ္ဍပ်ကြောင့် ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ကျောင်းဝင်းသို့ အ၀င် အထွက် ခက်၍ ကျောင်းသားများ ယာဉ်သွားယာဉ်လာ အန္တရာယ်နှင့်လည်း ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း
ပြောသော်လည်း လက်ခံမှု မရှိပါ။
ထို့အပြင် အမှတ် ၄ အလယ်တန်း ကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများက ကျောင်း
ရှေ့ မျက်နှာစာရှေ့ပိတ်ကာကျောင်း၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မဏ္ဍပ် ဆောက်ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများ အ၀င်အထွက် ခက်ခဲ၍ လမ်းပိတ်ဆို့မှုလည်း ဖြစ်ပွားနေသည့် အတွက် ဖယ်ရှားပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော် လည်း ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများကိုလည်း ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော အကြောင်းများကြောင့် မဏ္ဍပ်အား ဖယ်ရှားပေးရန် တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း စစ ဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့်က ဦး ဆောင်ပြီး ဦးဌေးမြင့်၊ ဦးသန်းမောင်၊ ဦးထွန်း၊ ဦးပီချေး၊ နိုင်ကြီး၊ ဦးရဲလွင်ကျော်၊ ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် တို့ပါဝင်သည့် လူအုပ်စုက တခြား ရပ်ကွက်မှ လက်မရွံ့လူမိုက်များ စုဖွဲ့ကာ မဏ္ဍပ်ကိုလည်း မဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်း၊ လှုံ့ဆော်ဟောပြောနေ မှုများကိုလည်း မရပ်နိုင်ကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ကာ ဘာသာရေး အဓိကရိုဏ်း ဖန်တီးနေ မှုအား မဖြစ် သင့်၍ အဆိုပါ မဆလ နွယ်ဖွား ရပ်ရွာ မတည်ငြိမ်စေရန် ဘာသာရေး အဓိကရိုဏ်းဖန်တီးနေ မူ များကို ရပ်တန့်သင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ရာတွင်လည်း ကျောင်းဆရာမကြီး၏ ခင်ပွန်းမှာ အစ္စလမ် ဘာသာ ၀င်ဖြစ်သည်ကို အကြောင်းပြပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ တုံ့ ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လှုံ့ဆော်နေကြသူ လူအုပ်စုထဲမှ ဦးဌေးမြင့် ဆိုသူမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဆလ တဖြစ် လဲ တိုင်းရင်း သား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ဆန္ဒမဲ ၂၇ မဲသာ ရရှိခဲ့သူ၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို မယုံကြည်ပဲ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုလေ့ ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကိစ္စကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ၊ ကျောင်းသား မိဘများအနေဖြင့် အလွန်စိတ်မကောင်းစွာ
မြင်တွေ့နေကြရ၍ တချို့ ကျောင်းသားမိဘများကလည်း ဒေါသများဖြစ်နေပါသဖြင့် မလိုလားအပ် သည့် ပြဿနာ များ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရေး ကြောင့် ယခုလို မီဒီယာများကို ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ အနေဖြင့် စာပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ မီးပွားလေးမှသည် ကြီးမားသည့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားစေမည့် အသုံးအနှုန်း၊ အပြော အဆိုများလုပ် ဆောင်နေသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အချိန်မီ ထိန်း သိမ်းနိုင်ရန် အတွက် အကူအညီတောင်းခံရင်း အသိပေး လိုက်ပါတယ်။
- See more at: http://blog.irrawaddy.org/2013/02/blog-post_8363.html#sthash.xG1KJuPc.dpuf